ပုတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်လေးတွေဟာ သာမန်ကလေးတွေနဲ့ မတူဘူး
UNICEF မှ အာဟာရပညာရှင် ဒေါက်တာကျော်ဝင်းစိန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်ပုနေတဲ့ ကလေး ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေး ၂ ဒသမ ၅ သန်းက အရပ်ပုနေတယ်။ အဲဒါက အစိုးရနဲ့ UNICEF &JU Multiple Indicator Cluster Survey 2010 အရ ပုတဲ့နှုန်းနဲ့ မြန် မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ ၅၉ သန်းအပေါ်မူတည်ပြီး တွက်ထားတာပေါ့။ ကလေး ၂ သန်းကျော်ဟာ ပုနေတယ်။ အဲဒါဟာ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီတော့ တကယ့်လူဦးရေမ ဟုတ်ေ သး တော့ အတိုးအလျော့တော့ ရှိနိုင်တာ ပေါ့။ တကယ့်လူဦးရေစာရင်းကမ ကောက်တာကြာပြီဆိုတော့ နောက်ပိုင်း စာရင်းကောက်ပြီးသွားရင်တော့ တိကျတဲ့ စာရင်း ထွက်လာမှာပေါ့။
မြန်မာမှာက ဘာကြောင့်အရပ် ပုတဲ့သူ များသွားတာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံထက် များတဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပုနေတဲ့ ကလေးတွေ ၈ဝရာခိုင်နှုန်းဟာ၂၄နိုင်ငံ မှာပဲရှိတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ဆယ်နိုင်ငံက အာရှမှာရှိတယ်။ အဲဒီဆယ်နိုင်ငံမှာ မြန်မာပါတယ်။ နီပေါပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ပါတယ်။ အရှေ့တီမောလည်းပါတယ်။
အရပ်ပုတာရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
ဒါအရေးကြီးတယ်။ တချို့တွေက တွေးတာက အရပ်ပုတာက အရပ်ပု တာပဲပေါ့။ မဟုတ်ဘူး အရပ်ပုတာ ဆိုးတယ်။ အရပ်ပုတာက ကျန်းမာရေး တစ်ခုတည်း တင်မဟုတ်ဘူး။ အရပ်ပု တာက နံပါတ်တစ် ကျန်းမာရေးထိ တယ်။ တစ်နှစ် တစ်နှစ်မှာငါးနှစ်အောက် ကလေးတွေသေတယ်။ အဲလို သေတာ ရဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ဟာ အရပ်ပုတာ ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျန်းမာရေး တစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူး။ ပညာရေးမှာလည်း သွားထိသေးတယ်။ ပုတဲ့ကလေးေ တွရဲ့ဦးနှော က်ဆဲလ်ေ လး တွေဟာ သာမန်ကလေးတွေနဲ့ မတူဘူး။ ဦးနှောက်ဆဲလ်လေးတွေက ပုံစံမမှန် ဘူး။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ သာမန်ကလေး တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်ေ လးတွေဟာ အခက်အ လက်တွေ အများကြီးဖြာထွက် နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရပ်ပုတဲ့ ကလေး တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်လေးတွေဟာ မဖြာဘူး။ အခက်အလက် မများဘူးပေါ့။ အဲဒါနဲ့တင် တော်ေ တ်ာကွာသွားပြီ။ နောက်ပြီး ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာ လည်း School Performance က ကျသွားပြီ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တွက်ထားပြီးသား။ ဘယ်လိုတွက်ထား လဲဆိုရင် ပုတဲ့နှုန်းက ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း တက်သွားမယ်ဆိုရင် မူလတန်းကို ပြီး အောင် တက်တဲ့နှုန်းက ၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျသွားမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြည့် မယ်ဆိုရင် ၅၄ ရာခိုင်နှု န်းဟာ မူလတန်း ကိုပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုရင် တကယ်လို့ သာ ပုတဲ့နှုန်းကို ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ချ လိုက်မယ်ဆိုရင် မူလတန်းပြီးတဲ့နှုန်း ဟာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြီးသွားမယ်။
အခုတွက်ထားတာ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားမယ်။ ဒါ Data တွက်ထားတာ။ နောက်ပြီး ကျန်းမာရေး နဲ့ ပညာရေး တင်မဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေး မှာလည်း အရေးကြီးတယ်။ ပုတဲ့ကလေး တွေပဲ များမယ်ဆိုရင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဟာ လည်းကျသွားတယ်။ လုံးဝကျသွား တယ်။ ပုတဲ့နှုန်းကို ချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် GDP ဟာလည်း သုံးရာခိုင်နှုန်း တက်သွားမယ်။ အဲဒီတစ်ခုတည်းလားဆို တော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ အားကစားမှာ လည်း သွားအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီ တော့ ဘောလုံးကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အ လေးမတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘောလီဘောပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ဘောလီဘောဆို ပြောမနေနဲ့ တော့ အရပ်ပုရင်ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရ ဘူး။ အဲဒီတစ်ခုတင်မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ အားကစားတွေမှာလည်း အရေးကြီး တယ်။ ခုန ပုတဲ့ကလေးတွေနှုန်းများ လာရင် ရွှေတံဆိပ်ရဖို့ မသေချာတော့ ဘူး။ စိတ်ချ။ အဲဒီတော့ အားကစားတွေ မှာ ဆုတံဆိပ်မရတာ အာဟာရမပြည့်ဝ လို့ဆိုတော့ နင်းကန်ကျွေးကြတယ်။ အဲဒါ ပိုဆိုးသွားတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ စလုပ် ရမှာလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် က တည်းက စလုပ်ရမှာ။ အာဟာရက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကတည်းက ပြည့်ဝ အောင်ပေးရမှာ။ ပြီးတဲ့အခါကျရင် သုံး နှစ်အောက် ကလေးတွေကို အပြည့် အဝပေးရမယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီကလေးဟာ ကြီးလာတဲ့အခါ ကျရင် ဒီကလေးဟာ အားကစားနဲ့ ပတ်သက်ရင်ထပ် Train ပေးလိုက်ရင် ဒီကလေးဟာ ရွှေတံဆိပ် ဆုရကိုရမှာ ကျိန်းသေတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ပုတဲ့ ကလေးဟာ ဒီလောက် ၃ ပုံ ၁ ပုံများနေတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ဆုတံဆိပ်ရဖို့ မသေချာတော့ဘူး။အဲဒါဟာ ခုနကပြောတဲ့ အာဟာရ နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်။ အရပ်ပုတာနဲ့ လည်းဆိုင်တယ်။ တခြားအချက်တစ် ချက်နှစ်ချက်လည်း ပါတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အရေးကြီးဆုံးအချက် တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရေး ကြီးတယ်။ ကျန်းမာရေးရော၊ ပညာရေး ရော၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရော၊ အားက စား မှာရော အကုန်လုံးအရေးကြီးတယ်။ အဲဒါ သူ့ effect တွေက အရမ်းအရေး ကြီးတယ်။ အဲဒါသာတင်ပေးလိုက် မယ်ဆိုရင် မြန်မာက တက်သွားမှာ။ စဉ်းစားကြည့် မယ်ဆိုရင် အာဟာရချို့ တဲ့တာ ပုတာဟာ အဲဒီကလေးနဲ့တင်ဆိုင် တာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီမိသားစုနဲ့တင် ဆိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ပါ ဆိုင်တာ။ ဒါ နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဦးစားပေးရမယ့် လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ။ ဥပမာ ထားပါတော့ နိုင်ငံတော်က လုပ် နေတာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး လုပ်တာဟာ ဒီအရပ်ပုတာကို ဖြုတ်နိုင် ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အခု အစိုးရက ၂ဝ၁၄-၁၅ မှာငါးနှစ်အောက် ကလေး သေ မယ့်နှုန်းကို ချမယ်ဆိုတာ ဒီ Nutrition မပါရင် ချလို့မရဘူး။ Nutrition Intervention က အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ငါးနှစ် အောက်ကလေးေ တွ သေတယ်။ အများ ကြီးသေတယ်။
ဒါတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင် မလဲ။
ဒီကလေးတွေကို အသက်ကယ်နိုင်မယ့် Intervention တွေရှိတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အကောင်းဆုံးက မွေးစမှ အသက် ၆ လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်တာဟာ ငါးနှစ်အောက် ကလေး သေနှုန်းကို ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ချပေးနိုင် တယ်။ ဘာပစ္စည်းမှ ပေးစရာမလိုဘူး ။မိခင်နို့တိုက်တာပဲ။ အရည်အေ သွး ပြည့်ဝတဲ့ ဖြည့်စွက် စာတွေ ကျွေး မယ် ဆိုရင် ငါးနှစ်အောက် ကလေးသေနှုန်း ကို ၉ ရာခိုင်နှုန်း ချပေးနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိခင်နို့တစ်မျိုး တည်းတိုက်တဲ့နှုန်းဟာ အရင်ကဆိုရင် ၁၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာ။ အခု ဆိုရင် တက်လာတယ်လေ။ စီမံကိန်းတွေ ချပြီး လုပ်နေတာပဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပြန့်အောင် အခု Infant and Young Child Feeding (IYCF) အသက်သုံးနှစ်အောက် ကလေးတွေကို အစားအစာ ကျွေးမွေးရမယ့် ဗျူဟာကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ ဆရာတို့ UNICEF က နည်းပ ညာပိုင်း၊ ငွေရေး ကြေးရေးပိုင်းကို ပံ့ပိုးတယ်။ အဲဒီမှာ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေး ရေးလည်း ပါတယ်။ ခုနကပြောသလို ကွာလတီ ပြည့်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေ ကျွေးမယ်။ Intervention တွေ အများ ကြီးပါတယ်။ ၂ဝ၁၁-၁၂ ကနေ ၂ဝ၁၅-၁၆ အထိ ၅ နှစ်စာစီမံကိန်းချပြီးလုပ် နေပြီ။ အခု ၂ဝ၁၃ ဆိုတော့ လုပ်နေ ရင်းတန်းလန်းပေါ့။ အဲဒီလို လုပ် မယ်ဆို တစ်ချိန်မှာ အရပ်ပုတာကျကျလာမှာ။ အဲဒီတော့ အဲဒီရဲ့ ၅ နှစ်စာ စီမံကိန်းရဲ့ အထဲမှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ခုနက ပြောတဲ့ လူတွေကို အသိပ ညာပေး တာ တွေ၊ မိခင်နို့ဘာကြောင့် တိုက်တာလဲ။ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတာသည် ဘာကြောင့် ကျွေးရသလဲဘာတွေပါရမလဲ စသဖြင့် သင်တန်းတွေပေးမယ်။
စာရွက်စာတမ်း TV, DVD တွေထုတ်တာတစ်ခုပေါ့၊ နောက်တော့ ဆေးရုံတွေမှာ မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးရေးတွေမှာ သင်တန်းပြန် ပေးတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးကျောင်းတွေ မှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာထည့်တယ်။ ဆရာဝန်တော်တော်များများတွေက ဆရာဝန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ အတော်များများက ဘာမှ မသိကြဘူး။ အခု ဆေးကျောင်းေ တွမှာ ထည့်တယ်။ ပြီးရင် သားဖွားသင်တန်းကျောင်းတွေ၊ အဲဒီမှာ အကုန်ထည့်မယ်။ နောက်တစ် ချက်က ဥပဒေထုတ်မယ်။ ဥပမာနို့မှုန့်။ မွေးစကနေ ၆ လအထိ မိခင်နို့ တစ် မျိုးတည်း တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ နို့မှုန် တွေကြော်ငြာရင် ဘယ်လိုကြော်ငြာရ မလဲဆိုတဲ့ ဥပဒေ အခုရေးဆွဲတုန်းပဲ။ အဲဒါအတည်ဖြစ်ရင် လိုက်နာရတော့ မယ်။ ဥပမာမိ ခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက် မယ်ဆိုရင် သူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ Supporting လိုတာပေါ့။ အထောက် အကူလိုတယ်။ ဘာအထောက်အကူတွေလိုလဲဆိုတော့ ခုန ကပြောတဲ့မီးဖွားခွင့်တွေပေါ့။ ၆ လဖြစ်ဖို့ပေါ့။ ငါးနှစ်စာ Plan မှာပါ တယ်။ မိခင်နို့ တိုက်မတိုက် Counselling လုပ်တာ၊ နှစ်သိမ့် ဆွေး နွေး အကြံပေးတာတွေ လုပ်မယ်။
ကလေးတစ်ယောက် အရပ်ပုရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘယ်လို အချက်တွေကြောင့် ပုနေရတာပါသလဲ။
အသက် ၃ နှစ်အောက် ကလေး တစ်ယောက်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီ ကလေးက ကြီးလာရင် အရပ်ရှည်လား မရှည်ဘူးလားဆိုတာကို တစ်ခါတည်း ခန့်မှန်းနိုင်တယ်။ သုံးနှစ်ကျော်သွားရင် လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ကလေးတွေ အရပ်တက်လာတာ အချိန် ၃ချိန်ရှိတယ်။ ပထမတစ်ချိန်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမ ၃ လက အရမ်းအရေးကြီး တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမသုံးလက ဘာဖြစ်လို့ အရေးကြီးလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမသုံးလမှာ ကလေး က အရပ်အရမ်းထွက်လာတာ။ အဲဒီ ပထမသုံး လမှာကလေးဖြစ်လာတဲ့ ဆဲလ် လေးတွေ ပွားလာတာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလကို သုံးပိုင်းပိုင်းရင် ပထမအပိုင်း က ဆဲလ်လေးတွေ ပွားလာတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဆဲလ်လေးတွေ ပွား လည်း ပွားလာတယ်။ ပွားထားပြီးသား ဆဲလ်လေးတွေက တဖြည်းဖြည်းကြီးလာ တယ်။ နောက်ဆုံး တတိယသုံးပိုင်းကျ တော့ ဆဲလ်လေးတွေက မပွားတော့ ဘူး။ ကြီးပဲကြီးတော့တယ်။ အဲဒီတော့ စဉ်း စားကြည့်လိုက်ရင် ဆဲလ်တွေပွားလာတဲ့ အချိန် ပထမသုံးလက အရမ်းအရေးကြီး တယ်။ ဥပမာဆဲလ်တွေ ကလိုသေ လာက် မပွားဘူးဆိုရင် ကြိုက်သလောက်ကြီး လေ လိုချင်တဲ့အရွယ် အစားမရတော့ ဘူး။ ဆဲလ်အရေအတွက် ပြည့်အောင် ပွားရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမ သုံး လမှာရှိတဲ့ အာဟာရက အရမ်းအရေး ကြီးတယ်။
ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလမှာ ဆဲလ် လေးတွေပွားဖို့အတွက် ဘာလိုအပ်သလဲ ဆိုရင် ဗိုက်တာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်ပြည့် ပြည့်ဝဝရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဗိုက်တာ မင်နဲ့ သတ္တု ဓာတ်ပြည့်ပြည့် ဝဝရရင် ဆဲလ်လေးတွေ ပွားလာပါတယ်။ ကိုယ် ဝန်ဆောင် ဒုတိယသုံးလမှာတော့ ဗိုက် တာမင်သတ္တုဓာတ်အပြင် ကစီဓာတ်၊ အသားဓာတ်တို့၊ အဆီ ဓာတ်တို့လိုတယ်။ တတိယ သုံးလကျတော့ ဗိုက်တာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တို့ သိပ်မလိုတော့ဘူး။ ဆဲလ်ကကြီးလာဖို့ကျတော့ အာဟာရက ကြီးထွားစေတဲ့ ကစီဓာတ်တို့၊ အသား ဓာတ်တွေ လိုတယ်။အဲဒီတော့ ပထမသုံးလက အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်အပ်ကြ လဲ။ ပထမသုံးလဆို မသိကြ ဘူး။ အဲဒီ တော့ ပထမသုံးလက လွတ်ကိုလွတ်သွား တာ။ အဲဒီတော့ ပထမသုံးလမိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ပထမသုံးလမိ အောင်ဆိုရင် ဟိုးကိုယ်ဝန် မဆောင် ခင် ကတည်းက လုပ်ရတော့မယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင် အိမ်ထောင်ပြု ပြီးတာနဲ့ တစ်ချိန်ချိန်သူသည် ကလေး ယူတော့မှာပဲ။ ခုနက ပြောတဲ့ ဗိုက်တာ မင်နဲ့ သတ္တုဓာ တ်တွေ ပြည့်ဝအောင် စားရတော့မယ်။
ဆေးဝါးတွေသုံးဆောင် ရတော့မယ်။ အဲဒါက တစ်ပိုင်းပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပျို အရွယ်ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတွေကို စစ်တမ်းကောက်တဲ့နေရာမှာ ၂၆ ရာ နှုန်းက သွေးအားနည်းနေတယ်။ အဲဒီ အရွယ်ဟာ သွေးအားနည်းရမယ့်အရွယ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအရွယ်တွေမှာ သွေး အားနည်းရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ပိုဆိုး သွားပြီ။ ဘယ်ကတည်းက အာဟာရ ပြည့်ဝရမလဲဆိုရင် ဟိုးအပျိုပေါက် အရွယ်ကတည်းက ပြည့်ဝရမယ်။ ကိုယ် ဝန် မဆောင်ခင်လည်း ပြည့်ဝရမယ်။ အဲဒီတော့မှ ပထမသုံး လမီမှာ။ ချက် ချင်း သိတာ လူနည်းစုပါပဲ။ အဲဒီလူတွေ အတွက်တော့ ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။
အဲဒီမှာ လွတ်သွားပြီဆိုရင်ကလေး က နည်းနည်းသေးသွားပြီ။ အဲဒီအချိန် လွတ်သွားပြီဆိုရင် နောက်တစ်ချိန် မီ နိုင်တဲ့ တစ်ချိန်ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက အသက် ၃ နှစ်ေ အာက်အချိန်မှာပေါ့။ အသက် ၃ နှစ်အောက်ကလေးကို အ စာကျွေးတာလည်း အရမ်းအရေးကြီး တယ်။ မြန်မာမှာတင် မကဘူး တစ် ကမ္ဘာလုံးမှာ ကလေးတွေကို အစာ ကျွေးတဲ့ နေရာမှာ ကလေးတွေအစာစား တာပဲ။ ကြိုက်သလောက်စား၊ ကြိုက် တာစား သိပ်အရေးမကြီးဘူး။ သုံးနှစ် အောက် ကလေးတွေ အစာကျွေးတာ ဟာ တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကို သူတို့ မသိကြဘူး။ အဲဒီတော့ သုံးနှစ်ကျော်သွားရင် အဲဒီကလေးကို ကြိုက်သလောက်ကျွေး မတက်တော့ ဘူး။ တချို့က တတိ ယအချိန်ကျွေးတာ ပေါ့နော်။ လူပျိုပေါက်၊ အပျိုပေါက် အချိန် ဒါပေမဲ့ လူပျိုပေါက်အပျိုပေါက် အချိန်ကျတော့ သိပ်မတက်တော့ဘူး နည်းနည်းလေးပဲ တက် တယ်။ကိုယ် ဝန်ဆောင်အာဟာရနဲ့ သုံး နှစ်အောက်ကလေး အစာကျွေးတာ အဓိကပဲ။ အဲဒီနှစ်ချက်မိလိုက်ရင် ပြီးပြီ ပဲ။ အဲဒီမှာ ပထမသုံးလမှာမိဖို့က အ ရမ်းခက် တယ်လေ။ အဲဒီတော့သုံးနှစ် အောက်ကလေးမိဖို့က အရမ်းအရေးကြီး တယ်လေ။ နံပါတ်တစ်အချက်က မိခင် နို့ တစ်မျိုးတည်းကို မွေးစကနေ ၆ လအထိ တိုက်တာ၊ ရေတောင်မတိုက် ရဘူး။ မွေးစကနေ ၆ လ ကလေးတွေ ကိုရေမတိုက်တဲ့အခါကျတော့ မိခင် တွေက ကလေးတွေရေဆာမှာပဲ ထင် ကြတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ မိခင်နို့မှာ ရေက ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကပဲ အာဟာရတွေ သတ္တုဓာတ်တွေ၊ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားတွေပါတယ်။ အဲဒါက ကလေး တွေအတွက် လုံလောက်ကို လုံလောက် တယ်။ ဘာမှ မလိုအပ်ဘူး။
နံပါတ် ၂ အချက်က ၆ လပြည့် တာနဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေကျွေးရမယ်။ကလေးနှစ်နှစ်အထိ ကျွေးရမယ်။ ကျွေး တဲ့အခါမှာလည်းမိခင်နို့ကို ကလေး နှစ်နှစ်အထိ ဆက်တိုက်ရ မယ်။ အဲဒီ တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြည့်စွက်စာကျွေး တာ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြည့်စွက်စာတွေက ကွာလတီမကောင်းဘူး။ ကွာလတီ မ ပြည့်ဝဘူး။ ဖြည့်စွက်စာက အသ က် ခြောက်လကနေ စတင်ကျွေးရမှာ။ အ ကြိမ်အရေအတွက်လည်း မှန်ကန်ရ မယ်။ အသက်ရှစ်လ၊ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ် အထိ ဘယ်နှကြိမ်ကျွေးရ မယ်ဆိုတာ မျိုး ပေါ့ ။နံပါတ်သုံးအချက်ကတော့ ကလေး တွေကို အစုံကျွေးရမယ်။ ကလေးတွေကို ကျွေးတာ အစာအုပ်စုကို ခွဲထားတာ ၇ ခုရှိတယ်။ အဲဒီ ၇ ခုလုံး ကျွေးရမယ်။ သံဓာတ်ပြည့် ဝတဲ့ အစားအသောက် တွေ ကျွေးရမယ်။ သံဓာတ်အစားအစာ မကျွေးနိုင်ရင် အားဆေးကျွေးရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ကလေးတွေကိုဘာ ကျွေးလဲဆိုတော့ ထမင်းနဲ့ ဆီလေးနဲ့ ငါးလေးနဲ့ ကျွေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဗိုက်တာ မင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေလုံးဝမပါဘူး။ ဗိုက်တာမင်ကအေဒီအီးကေ အများကြီး ပါပဲ။ သတ္တုဓာတ်တွေမှာ အိုင်အိုဒင်း၊ သံ ဓာတ်ပါမယ်၊ ဇင့်ပါမယ် အဲဒါတွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အများကြီးလိုတယ်။ ဝမ်းလျှောရင်တိုက်တဲ့ ဓာတ်ဆားရည် တွေကိုကြည့်ရင် ဗိုက်တာမင်နဲ့ သတ္တု ဓာတ်တွေ အများကြီးပါတယ်။ အဲဒါ တွေက အသက်ကယ်တာလေ။ အဲဒါ တွေ ကလေးတွေမှာ နည်းနေပြီဆိုရင် မထွားတော့ဘူး။ကလေးတွေကို အရပ်ပုစေတဲ့ အကြောင်းရင်း နံပါတ်တစ်ကတော့ ခုနက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအာဟာရ မပြည့် ဝတာ။ နံပါတ်နှစ်က သုံးနှစ်အောက် ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့အစာကျွေး တာမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိ တာပေါ့။ မြန် မာနိုင်ငံမှာက မွေးစကနေ ၆ လ အထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်တဲ့နှုန်းက လည်း အရမ်းနည်းတယ်လေ။ အဓိက က အဲဒီအကြောင်း အရင်း နှစ် ချက် ကြော င့်ပေါ့။ သုံးနှစ်အောက် ကလေး တွေကို အစာကျွေးတာမမှန်တာ အဲဒါ ကြောင့် ပုတာ။
အရပ်ပုတဲ့ကလေးတွေ များလာ မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ အကျိုးဆက်ရှိမလဲ။
ခုနက ပြောသလို ၄ ချက်၊ (၁) ငါးနှစ်အောက် ကလေးသေနှုန်းလည်း များလာမယ်။ (၂) မူလတန်းကျောင်းပြီး မြောက်မှု စာတတ်မြောက်မှု နည်းသွား မှာပဲ။ (၃) နောက် အားကစားမှာလည်း ယှဉ်လို့မရဘူး။ (၄)ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလည်း ကျသွားမှာပဲ။ ဒီဟာတွေက အကုန် နိုင်ငံအတွက်တော့ အရေးကြီးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အရပ်ပုတာ ကျသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်က အာဟာရ လုပ်ငန်းတွေကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရတာ။ ဆရာတို့ အစည်းအဝေး အကြီးကြီးတစ် ခုလုပ်ရမယ်။ ဒီအရပ်ပုတဲ့လူတွေကို လျှော့ချဖို့။ ခုနကပြောတဲ့ ၅ နှစ်စာ စီမံ ကိန်းမှာလည်း မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်တဲ့နှုန်းတွေ တက်လာအောင်လုပ် မယ်။ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့ ကွာလတီ တွေ ပြည့်ပြည့် ဝဝတစ်နိုင်ငံ လုံး ပြန့် အောင်လုပ်မယ်။ ဒါတွေအားလုံးက ငါး နှစ်အောက်ကလေး အရပ်ပုတာကို လျော့စေတာတွေချည်းပဲ။ နောက်တစ် ခုထပ်ထည့်ရမှာက ကိုယ်ဝန်ေ ဆာင် တွေရဲ့အာဟာရ။ ဆရာတို့အခုက Iron ဖောလစ်အက်ဆစ်တွေ ပေးတယ်။ မလုံလောက်သေးဘူး။ အများကြီးလိုအပ် သေးတယ်။ ပထမသုံးလ လွတ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်ကတည်းက လုပ်ရမလဲဆိုတော့ ကျောင်းနေအရွယ်ကတည်းက သင်ရတော့မယ်လေ။ Education လေ။ ကျောင်းစာတွေမှာ ကတည်းက ပါရတော့မယ်။ အပျိုဖော်ဝင်အရွယ်တွေ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရတော့မယ်။ နောက်ပြီး မီဒီယာကလည်း အရေးကြီးတာပဲ။ နောက်ပြီး မီဒီယာကအခုဆို ဂျာနယ်တစ်ခုတည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ ရေဒီယိုတွေ၊ FM တွေ၊ TV တွေကနေ တစ်ဆင့်ထည့်လို့ ရတာပဲ။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာရော ဘယ် လိုတွေ လုပ်နေကြပါသလဲ။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် လည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် Plan တွေ ဆွဲပြီးလုပ်ကြတာပဲ။ နီပေါမှာဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုပဲ။ နီပေါမှာဆိုရင် ဆရာတို့ထက် စောတယ်။ သူတို့မှာလည်းကျလာ တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အာဟာရရယ်၊ IYCF ရယ် ဒါက အဓိကလုပ်တာပေါ့။နောက်တစ်ပိုင်းလုပ်တာက ဘာလဲဆို တော့ အစားအသော က်ဖူလုံ ဖို့နဲ့ ရော ဂါ ကာကွယ်ဖို့ကလည်း သူတို့လည်း အား ဖြည့်ကူညီပေးရမယ်လေ။ အရေးပေါ် အစားအသောက်မပြည့်ဝရင် ရောဂါ ဖြစ်ရင် တစ်ချိန်လုံးရေရှည်စွဲ ကုပေး ရ မှာမျိုးပေါ့။ ဗီယက်နမ်မှာလည်း အကြီး အကျယ်လုပ်တယ်။ ထိုင်းမှာလည်း လုပ် တယ်။ ကြာပြီသူတို့လုပ်တာ။
အရပ်ပုတာက အခုမှဖြစ်တာလား။ အရင်ကတည်းက ရှိခဲ့တာလား။
ပုတာကျတော့ ချက်ချင်းမဟုတ် ဘူး။ သူက Generation အလိုက် ပုတာ။ ပိန်တာကျတော့ ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေး လိုက်။ အာဟာရပြည့်ဝေ အာင်စားလိုက် ရင်မပိန်တော့ဘူးလေ။ ဝလာမှာပဲ။ အရပ်မြင့်ဖို့က သုံးနှစ်ကျော်ရင် လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ အခုလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း ရှည်အောင်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ နောက်ထပ်တိုးလာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် လုပ်ရမယ်။ အဲဒါကလည်း ချက်ချင်းမသိသာဘူး။ အခုလုပ်မှ နောက်ဆယ်နှစ်လောက်မှ သိသာမှာ။ ဒီကလေးတွေက နောက် ဆယ်နှစ်လောက်မှ ကြီးလာမှာလေ။ အဲဒီတော့မှ ပညာရေးရော၊ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုရော၊ အားကစားရော တက်လာ မှာလေ။ ဆယ်စုနှစ်ချီပြီး လုပ်မှအရပ်ပု တာအတွက် effect ဖြစ်စေမှာ။
အရပ်ပု၊ မပု ဘယ်လို စံချိန်စံညွှန်း တွေနဲ့ တိုင်းတာပါသလဲ။
ပထမဆုံးကလေးတွေကို သတ် မှတ်တဲ့ အရပ်စံချိန်မီမမီဆိုတာကို သတ်မှတ်တဲ့ WHO Standard ကို သုံးတယ်။ အခုက ဆရာတို့မှာ ငါးနှစ် အောက်ကလေးတွေကို တိုင်းတာတာ ၃ မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးက Under Weight ဆိုတာ ကလေးတွေကို ဝိတ် ချိန်တာပေါ့။ သွားဖွား ဆရာမတွေက ဝိတ်ချိန်ရင် Under Weight ဆိုတာ သိတယ်။ Under Weight ဆိုတာ ရှိ သင့်တဲ့အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ်အလေး ချိန်မပြည့်ဘူး။ Under Weight လို့ ပြောရင် ဆရာတို့က ၂မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်ခုက လတ်တလောအာဟာရ ချို့တဲ့ တာ။ နောက်တစ်ခုက ရေရှည် အာဟာ ရ ချို့တဲ့တာ။ လတ်တလော အာဟာရ ချို့တဲ့တာက ပိန်သွားတာ။ ရေရှည် အာဟာရ ချို့တဲ့တာက ပုသွားတာ။ အဲဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးကို ဘာနဲ့ ပြန်တိုင်းလဲဆိုတော့ အရပ်နဲ့ ပြန်တိုင်း တယ်။ ပြန်တိုင်းတဲ့အခါ ရှိသင့်တဲ့ အသက်အရွယ်မှာ ရှိသင့်တဲ့အရပ် မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒါဟာ ပုသွားပြီ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဇယား အတိုင်းမရှိရင် အရပ်ပုတယ်လို့ ပြော လို့ရတယ်။
မလုပ်ဘဲ ဒီတိုင်းဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။
ခုနက ပြောသလို အဓိကမြန်မာ နိုင်ငံမှာ မူလတန်းပညာသင်တဲ့နှုန်းတွေ ကျသွားပြီဆိုရင် သွားပြီလေ။ မူလတန်း မှာ မပြီးရင်တော့သွားပြီပေါ့။ ကလေး သေတာလည်း များလာမယ်လေ။ နောက်တတိယတစ်ခုက ကုန်ထုတ်လုပ် မှုလည်း ကျလာမယ်လေ။ အားကစား မှာလည်း မအောင်မြင်တော့ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံအတွက် သွားပြီပေါ့။ များလာလေ ပိုဆိုးပြီလေ။
မြ တ် စု ငြိ မ်းေ တွ့ ဆုံမေးမြ န်းသ ည်
စင်ကာပူအခြေစိုက်ကချင်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့မည်မဟုတ်
စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကချင်လူမျိုးတွေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကူအညီ မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး လို့ ကချင်အဖွဲ့အစည်း (စင်ကာပူ)က မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မနက်ဖြန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်္ကာပူလာပြီး မြန်မာပြည်သားတို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခမ်းအနားမှာ သူတို့အဖွဲ့ "ပါဝင်တက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း" ကြေညာချက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
တက်ရောက်တဲ့ ကချင်လူမျိုးတွေက အဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခြင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ကြေညာချက်မှာ ဆက်ရေးထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ပခရီးစဉ်အများအပြားထွက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စင်္ကာပူခရီးစဉ်ကျမှပဲ ဒီလို ကြေညာချက်ထုတ် ကန့်ကွက်ခံရမှုနဲ့ ကြုံရတာလို့ ယူဆရပါတယ်။
အထက်မှာ တွေ့ရတာကတော့ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ရောက် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တချို့ရဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က သိပံ္ပလွန်ဆိုသော အဖြစ်များ
သိပံ္ပအခြေပြု ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ ရုပ်ပြများ၊ ၀တ္ထုများထဲတွင် လူများ၏လှုပ်ရှားမှုကို လုံးဝဥဿုံစောင့်ကြည့်နေသော စက် ကြီးများကို တွေ့ရသလို အဆိုပါစက်ကို တီထွင်သူများထက်စက်ကကျော်လွန်သွားပြီးလူကိုပြန်လည်ချုပ်ကိုင်သည့် ဇာတ်
လမ်းမျိုးကြည့်ရဖူးပါသည်။ သိပ္ပံလွန်ကားဟုယူဆထားသဖြင့် အနာဂတ်တွင် မဖြစ်နိုင်သောအရာများကို စိတ်ကူးယဉ်ရိုက်ကူးထား
သဖြင့် ကြည့်၍အလွန်ကောင်းသော်လည်း ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုယူဆချက်များအပေါ် သံသယဖြစ်စရာများတွေ့လာရသည်။ ယင်းမှာမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုများပင်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုသိလျှင် ထိုဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသူ ကမ္ဘာ့မည်သည့်အရပ်ဒေသ ရောက်နေသည်ကို ရှာဖွေနိုင်
သည့် နည်းပညာရှိလာသည်။ ထိုမိုဘိုင်းဖုန်းမှ မည်သည့်ဖုန်းကို အကြိမ်မည်မျှခေါ်ဆိုသည်၊ မည်မျှကြာအောင် ပြောဆိုသည် စသည့်
အချက်အတိအကျကလည်း ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီတွင်ရှိနေသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဖုန်းစကားပြောသည့် အသံများ
ကို ဖမ်းယူနားထောင်နိုင်လာသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်များမရှိတော့ဟုပင် ဆိုရတော့မည်ဖြစ်သည်။
သာမန်အားဖြင့် ဖုန်းကုမ္ပဏီများက ၎င်းတို့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူများ၏ ခေါ်ဆိုမှုများကို လျှို့ဝှက်ထားရမည်ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရအာဏာကြီးတစ်ရပ်က တောင်းဆိုလာလျှင်ပေးအပ်ရပေသည်။ နိုင်ငံအချို့တွင် အစိုးရက ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်ထားသဖြင့် ကုမ္ပဏီများကို တောင်းရန်မလိုပါ။ ၎င်းဘာသာပင် ဆက်သွယ်ရေးများကို စောင့်ကြည့်ရယူနိုင်ကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် ပုဂ္ဂလိကကု မ္ပဏီများကသာ ၀န်ဆောင်မှုပေးသဖြင့် အစိုးရက တောင်းဆိုကြသည်လည်းရှိသည်။
ထို့ကြောင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသော မိုဘိုင်းဖုန်းကို ပြည်သူများ ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိတော့ဟုပင် ပြောနိုင်သည်။ မိမိ၏ လွတ် လပ်ခွင့်များထိပါးခံလာရသည်။ ဤသည်ကားခေတ်မီနည်းပညာသုံး မိုဘိုင်းဖုန်း၏ ထိုးနှက်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
လတ်တလော ဥပမာတစ်ခု ကို ကြည့်လျှင်အမေရိကန်နိုင်ငံက ဗယ်ရိုင်ဇုန်ဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်း ဖက်မှုများဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း အမေရိကန်ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရုံး အက်ဖ်ဘီအိုင်က လူများ၏ ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည်နိုင်ရန် မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုထိုးဖောက်လာသည်။ အမေရိကန်၏ အကြီး ဆုံးဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ဗယ်ရိုင်ဇုန်သုံးသူထဲမှ မသင်္ကာသူများကို တရားရုံးအမိန့်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်မှုကို နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်နားထောင်လာခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ဧပြီမှ ဇူလိုင်လအထိ တရားရုံးကခွင့် ပြုခဲ့ပြီးသန်းနှင့်ချီသောအမေရိကန်ပြည်သူများအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများကို ကြားဖြတ်နားထောင်ဖမ်းယူခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော်လည်း မသက်ဆိုင်သူများကြားမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများဖောက်ထွင်းခံရသည်ဟု လူမှုလွတ်လပ်ခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူများကပြောဆိုကြသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်း၏ လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေမှုများ လည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ နောက်ဆုံးအဖြေမှာ မိုဘိုင်း၊ အင်တာနက်စသည့်အရာအားလုံးအတွက် လုံခြုံရေးကိုမည်သူမှ အ ပြည့်အ၀ အာမမခံနိုင်ဆိုသော အဖြေသာဖြစ်သည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုကိုလူတို့၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အလဲအလှယ်ပြုနေရသည်ဟုပင် ဆိုရပေတော့မည်။
ဆေးမင်ကြောင်ကြောင့် L'Orealနှင့် မိတ်မပျက်ဘဲ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သွားမည့် Cheryl Cole
အလှကုန်များ ထုတ်လုပ်သည့် ကမ္ဘာကျော် L'Oreal ကုမ္ပဏီ၏ ကြော်ငြာ မော်ဒယ်လ်လည်းဖြစ် ၊ ဗြိတိသျှ နာမည်ကြီး Pop ဂီတ အဆိုတော် ဖြစ်သည့်
Cheryl Cole သည် သူမ၏ ကျောဘက်တွင် ကြီးမားသော နှင်းဆီပန်း ပွင့်ကြီးများပုံ ဆေးမင်ကြောင်ကို ရေးထိုးခဲ့သည့် အတွက် မိခင်က ကန့်ကွက်မှုနှင့် ၊ ကုမ္ပဏီမှ သဘောမကျမှုများကြောင့် L'Oreal နှင့် လမ်းခွဲရနိုင်သည်အထိ အဆိုးဘက်မှ သက်ရောက်မှုများသာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။
သို့သော် ယခုအခါ Cheryl Cole ၏ ဆေးမှင်ကြောင် တက်တူးသည် နောက်ကျောတွင်ဖြစ်ရာ မျက်နှာအလှနှင့် အရေပြား အသားအရေနှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ရောက်မှု နည်းစေသည်ဟု ယူဆသည်က တစ်ကြောင်း ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်စေသည်ဟု ကုမ္ပဏီဘက်မှ စဉ်းစားထားသည်။ Cheryl Cole သည် L'Oreal ၏ အလှကုန်ပစ္စည်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကတည်းက ကြော်ငြာပေးခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
သွားတိုက်တံ မရှိသည့်အခါ ခံတွင်းသန့်ရှင်းနေစေဖို့
သစ်ကြံပိုးခေါက် (cinnamon) ပါဝင်သည့် ပီကေ သည် ပါးစပ်အတွင်းရှိဘက်တီးရီးယားများကို သေစေ သည်။ cinnamic aldehyde ဓါတ်သည် သစ်ပင်မှရသည့် အဆီ ဖြစ်ပြီးသွားပိုးစားစေသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို နှိမ်နင်းနိုင်သည်။
ကြွပ်ဆတ်သည့်အစာများသည် သွားကိုတိုက်ချွတ်သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။ ပန်းသီး၊ မုန်လာဥ၊ တရုတ်နံနံ၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်စသည့် အစားအစာများသည် လည်း သွားကိုသန့်စင်ပေးနိုင်သည်။
လက်ဖက်ရည်တွင်ပါဝင်သည့် flavanoid ဓါတ်များ သည် သွားတွင်ကပ်ငြိနေသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။ သွားများကို ခိုင်မာစေသည့် fluoride ဓါတ်များသည် လက်ဖက်ရည်တွင် ပေါများစွာပါဝင်သည်။
တစ်နာရီတစ်ကြိမ်ခန့် ရေသောက်ပါ။ မကြာခဏ ရေအနည်းငယ်စီ သောက်ခြင်းကြောင့် ခံတွင်းရောဂါပိုး များ နည်းပါးစေပြီး သွားပေါက်ခြင်း၊ ပိုးစားခြင်း၊ သွားဖုံး ရောဂါများနှင့် ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးငယ် ဒုက္ခိတဖြစ်မှုအတွက် ဆေးထိုးသော ဆရာဝန်ကို အမှုဖွင့်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် လိပ်ကုန်း ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အဖျားဝေဒနာ ခံစားနေရသော အသက်လေးနှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူကို ဆေးခန်း၌ ကုသစဉ် ဆရာဝန်က ဆေးထိုးမှားသဖြင့် ဘယ်ဘက်ခြေ ထောက်အောက်ပိုင်းမှာ သိမ်ဝင်သွားကာ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သည့် ဒုက္ခိတဘဝ ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကာ ဆေးခန်းပိုင်ရှင် ဆရာဝန်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားကြောင်း လှော်ကားနယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် လိပ်ကုန်း ကျေးရွာတွင် ယခုနစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့က လိပ်ကုန်းကျေးရွာနေ အသက်လေးနှစ် အရွယ်ရှိ သမီးဖြစ်သူ မပြည့်စုံသည် ကိုယ်ပူကာ ဖျားနာနေသောကြောင့် ယင်းမြို့နယ် (၁၄) ရပ်ကွက်ရှိ အောင်သစ္စာ ဆေးခန်းသို့ လာရောက် ကုသခဲ့ရာ အသက် ၇၅ နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးဆရာဝန် ဒေါက်တာမိုလီဟာမက်က ကလေးငယ်၏ ညာဘက်တင်ပါးတွင် ဆေးတစ်လုံး ထိုးပေးခဲ့ပြီး အိမ်ပြန်အရောက်တွင် ကလေးငယ်မှာ လမ်းလျှောက်၍ မရတော့ကြောင်း ယင်းရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဌေးဝင်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဆေးခန်းသို့ သုံးရက်ဆက်တိုက် ပြသခဲ့သော်လည်း သက်သာမှု မရှိသဖြင့် ဒေါက်တာ မိုလီဟာမက်က ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက် ကုသရန် ပြောကြားခဲ့ရာ ဆေးရုံတွင် ကုသခဲ့သော်လည်း ကလေးငယ်၏ ဘယ်ဘက်ခြေထောက် အောက်ပိုင်းမှာ သိမ်ဝင်သွားကာ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သည့် ဒုက္ခိတဘဝ ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူက ၎င်းဆရာဝန်ကို အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကလေးက ဆေးခန်းသို့ ရောက်ရှိလာစဉ် အဖျားကျဆေး ၁ စီစီကိုသာ ညာဘက်တင်ပါးသို့ ထိုးပေးခဲ့ပြီး ယခုသိမ်ဝင်ခဲ့သော ခြေထောက်သည် ဘယ်ဘက်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေးငယ်၏ ဆေးကုသစရိတ် လိုအပ်သောကြောင့် လည်းကောင်း ကလေး၏ မိဘများက ချို့တဲ့သောကြောင့် လည်းကောင်း ငွေကျပ်ကိုးသိန်းကို ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးထိုးမှားသည်ဟု ဆိုသည်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အမှုဖွင့်ခံရသည့် လုပ်သက်နှစ် ၄၀ ကျော်ကြာ ဆေးကုသခဲ့သော အောင်သစ္စာ ဆေးခန်းပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးဆရာဝန် ဒေါက်တာမိုလီဟာမက်က ပြောကြားသည်။
ဆေးကုသမှု စရိတ်သည် ငွေကျပ် ကိုးသိန်းမက ကုန်ကျခဲ့သည့်အပြင် သမီးဖြစ်သူသည် ဒုက္ခိတဘဝ ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ကလေးငယ်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမောင်ဇော်က တရားလိုပြုကာ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လှော်ကားနယ်မြေ ရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
အောင်သစ္စာ ဆေးခန်းသည် ဆေးကုသစရိတ် သက်သာသောကြောင့် (၁၄) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူများနှင့် လိပ်ကုန်းကျေးရွာရှိ နေထိုင်မကောင်းသူများ အားထားကုသလျက်ရှိသော ဆေးခန်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းရပ်ကွက်နေသူများထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ အမှုကို (ပ) ၂၈၂/၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဟိုတယ်အခန်းအတွင်း တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့သည့် ဆီဒိုးနား လျှို့ဝှက် ကင်မရာ ရိုက်ကူးထားသည် ဗီဒီယိုဖိုင်များ ပြန့်နှံ့နေ
(Facebook အောက်ပါအတိုင်း သတင်းပျံ့နှံ့နေပါသည်။ သတင်းအမှားဖြစ်ပါတယ်။)
ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်၍ ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခု အွန်လိုင်းတွင် ပြန့်နှံ့လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွင် အနုပညာရှင် နာမည်ကြီးအသိုင်းအ၀ုိုင်းမှ ၂ ယောက်၊ အစိုးရအကြီးအကဲပိုင်းမှ ၃ ယောက်၊ ချမ်းသာသည့် ခရိုနီအသိုင်းအ၀ုိုင်းမှ ၅ ယောက်တို့ ပါရှိသည့်အတွက် အထူးပင် လူပြောများ နေကြောင်း သိရသည်။
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်လှသော High Definition ဗီဒီယိုဖြစ်ကာ အသံဖမ်းစနစ်လည်း အထူးကောင်းမွန်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ မှတ်တမ်းမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းက ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် လာရောက် တည်းခိုကြသူများအား ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် လူထုစိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အလားတူ ရန်ကုန်ဆီဒိုးနားအပါအဝင် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ ချောင်းသာနှင့် မန္တလေးဒေသများရှိ ဟိုတယ်ပေါင်း ၆ ခုတို့တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း တည်းခိုခဲ့ကြသူများ၏ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုများလည်း ထွက်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ နေပြည်တော်မှ ဟိုတယ်မှာ ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ် ဖြစ်ပြီး ယင်းဟိုတယ်အခန်းများအတွင်းမှ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများလည်း လိုချင်သူများ ရှိပါက မျှဝေပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
HD Version ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများတွင် ပါဝင်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း သိရှိရသည်။
(Hotel အခန်းတစ်ခုမှာ ပြောသံတစ်ခု)
မောင်ရယ် ကျမဖင်ပြောင်ပြီး အိပ်တာ hidden Cam ထဲမှာ ပါသွားမှာစိုးလို့စောင်ခြုံပြီး အိပ်ပါရစေနော် တဲ့ ......။
(Hotel အခန်းတစ်ခုထဲက ပုံရိပ်များ)
(အချိန်က လေးနာရီ... အခန်းတံခါးတစ်ခုကို ကောင်မလေးက သူ့ ချစ်သူမျက်နာကို ကြည့်လိုက်ပီး ညင်သာစွာ ပိတ်လိုက်တယ်.. ပြုံးပြတယ်.. ခဏလေးနော် ရေချိုးခန်းကို သွားလိုက်မယ်...တဲ့
ကောင်လေးမှာတော့ သူဖောင်းပီအိပ်ကို နိုက်လိုက်ပြီး... ပိုက်ဆံအိပ်ကိုဆွဲထုပ်လိုက်တယ်... သူ့ မျက်နာ အပြုံးများစွာနဲ့ ........CENSOR CENSOR CENSOR CENSOR အို CENSOR CENSOR CENSOR)
အထက်ပါ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို နမူနာအဖြစ် မြည်းစမ်းကြည့်ရှုလိုပါက ဂူးဂဲလ်မှတစ်ဆင့် လက်ဝယ်ပိုင်ထားသူအား မေတ္တာရပ်ခံကာ https://docs.google.com/file/d/0B5IWeiuuAQIkYjBIdGdsTU5vV28 တွင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ နမူနာဗီဒီယို မှတ်တမ်းမှာ (၁၀)နာရီစာ ဖြတ်တောက်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆီဒိုးနားဟိုတယ် မန်နေဂျာနှင့် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရိုက်ကူးမှုမှတ်တမ်းများကို ယင်းတို့ဟိုတယ် ၀က်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ခိုးဝင်၍ ရယူသွားသည် ဟု ယူဆလျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆီဒိုးနား ဝက်ဆိုက် http://www.sedonasmyanmar.com/ ကို ဖြုတ်ချထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဟိုတယ် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ပြန်လည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ အဆိုပါဟိုတယ်များတွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ တပ်ဆင်ခဲ့သူမှာ ဟိုတယ်များရှိ ဝန်ထမ်းများအတွင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်ကာ တပ်ဆင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေးကင်မရာများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်များတွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ တပ်ဆင်ကာ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို ၄င်း၏ကွန်ပျူတာတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို Delete လုပ်ထားခဲ့သော်လည်း ဖိုင်များ ပြန်လည်ရှာဖွေသည့် Software များဖြင့် ဖော်ထုတ် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက်နေထိုင်သူ မဟုတ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
နာမည်ကြီးဟိုတယ်အခန်းများအတွင်း မှတ်တမ်းဗီဒီယိုများကို ဂူးဂဲလ်တွင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်၍ ကြည့်ရှုသူများပြားနေသောကြောင့် လက်ရှိ အချိန်တွင် စိတ်ရှည်သည်းခံစောင့်ဆိုင်း၍ ကြည့်ရှုရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ဂူးဂဲလ်မှ အောက်ပါအတိုင်း Message ပေါ်လာခဲ့ပါက ယနေ့အတွက်တော့ စိတ်လျှော့၍ နောက်တစ်နေ့ ပြန်လည်ကြိုးစားကြည့်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
Sorry, you can't view or download this file at this time. Too many users have viewed or downloaded this file recently. Please try accessing the file again later. If the file you are trying to access is particularly large or is shared with many people, it may take up to 24 hours to be able to view or download the file. If you still can't accessafile after 24 hours, contact your domain administrator.
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဆီဒိုးနားသို့ သွားရောက်ခဲ့ဘူးသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အပြင်းအထန် လိုက်လံစုံစမ်းလျက်ရှိပြီး အချို့ဆိုလျှင် သွားရောက်ခဲ့သော စုံတွဲများ ဝါကျွတ်လျှင် မဖြစ်မနေ လက်ထပ်ရတော့မည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ယင်းဟိုတယ်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ဘူးသော အချို့သော နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များအနေဖြင့်လည်း ယင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ပြင်ပ ဈေးကွက်သို့ ထွက်ပေါ်မလာစေရန် ဆုတောင်းကြရတော့မည့် အနေအထား ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း အွန်လိုင်း အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာမူ ၁၀ နာရီစာ ကွာလတီမြင့် ဗီဒီယို မှတ်တမ်းများ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန့်နှံ့လျက် ရှိရာ မကြာခင်အချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ပြန့်နှံ့လာတော့မည် ဟု မျှော်လင့်ရပေသည်။
မွေးပြီးပြီးချင်း ဆင်ပေါက်လေးကို နင်းချေ ပစ်ပေါက်သတ်သည့် မိခင်ဆင်မကြီး
ဂျာမနီနိုင်ငံ Halle ရှိ တရိစ္ဆာန်ရုံငယ်လေးထဲတွင် ဆင်ပေါက်လေးကို မွေးဖွား ခဲ့သော မိခင်ဆင်မကြီးက မွေးပြီးပြီးချင်း သူမ၏ကလေးအား နင်းချေကာ
နှာမောင်းဖြင့် ပစ်ပေါက် သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Bibi ဟု အမည်ရသော ထိုဆင်မကြီးဟာ ယခုဆင်သားပေါက်နှင့်ပါဆို သုံးကြိမ်တိတိ သားဖွားသည့် အတွေ့အကြုံရှိသော ဆင်မကြီးဖြစ်သည်မို့ ယင်းသို့ ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့သောကြောင်း တရိစ္ဆာန်ရုံစောင့် ဝန်ထမ်းများက ဆိုခဲ့သည်။
Bibi က ဝန်ထမ်းများ လာဝင်မကူနိုင်ခင် ဆင်ပေါက်လေးကို မွေးပြီးပြီးချင်း
ခြေဖြင့်နင်းချေခဲ့ကာ သူမနှာမောင်းဖြင့် ပစ်ပေါက်သတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒါဟာ ကလေးမွေးဖွားရာတွင် ရရှိသော စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဝန်ထမ်းများက ဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံ Shandong နယ်မြေထဲက Rongcheng ရှိ Shendiaoshan သဘာဝသားရဲ တရိစ္ဆာန် ဘေးမဲ့ဧရိယာထဲတွင် သားပေါက်သော ဆင်မကြီးက ဆင်ပေါက်လေးကို မွေးပြီးပြီးချင်း ချေနဲ့နင်းနေခဲတာကို ဝန်ထမ်းများ က တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး ဒါဟာ ဆင်မကြီးက ဆင်ပေါက်လေးကို အမှတ်တမဲ့ နင်းမိတာလို့ ဝန်ထမ်းများက ထင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိခင်ဆင်မကြီး၏ အနင်းခံခဲ့ရသော ထိုဆင်ပေါက်လေးအား ရရှိလာသော ဒဏ်ရာများ သက်သာအောင် နှစ်နာရီအကြာ ကုသအပြီး ဆင်မကြီးဆီ
ပြန်ပို့သောအခါ ထိုဆင်မကြီးက ထပ်မံနင်းသတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ
ဝန်ထမ်းများက ဆင်မကြီးကို ဆင်ပေါက်လေးရဲ့အဝေး ခြောက်လွှတ် ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ၊ မိခင်ဆင်မကြီးရဲ့ ပစ်ပယ်မှုခံရသော ဆင်ပေါက်လေးဟာ ၎င်းအား ဝန်ထမ်းများက ဖျောင်းဖျ ချော့မောနေသည့်တိုင်အောင် ငါးနာရီကြာ အော်ဟစ်ငိုယိုနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
စင်္ကာပူ ဘဏ်၂ခုတွင် စစ်ခေါင်းဆောင်များ ဒေါ်လာ ၅ဘီလီယံ အပ်ထားဟု ERI ဖွင့်ချ
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ပြီးခဲ့သည့် ၉နှစ်အတွင်း ရတနာ ဂတ်စ်ပိုက် လိုင်းမှ ရရှိသော အမြတ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ဘီလီယံကို စင်္ကာပူရှိ ဘဏ် နှစ်ခုတွင် အပ်နှံထားကြောင်း Earth Rights International – ERI က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Oversea Chinese Banking Corporation နှင့် DBS Group ဘဏ်နှစ်ခုတွင် ရတနာ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှ ရရှိသော ငွေများကို အပ်နှံထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချမှုမှ လစဉ် ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝ ပုံမှန် ရရှိနေ ကြောင်း ERI ၏ အစီရင်ခံစာကို ကိုးကားပြီး လယ်ရီဂျေဂင်က The National သတင်းစာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း သတင်း မီဒီယာအချို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြား ဘဏ်များတွင် ဘဏ်ရင်း ၅ခုဖွင့်ကာ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ်နှံထားကြောင်း စွပ်စွဲချက်များ ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရ ဒုတိယ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးက အဆိုပါ သတင်းကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
၁၁ ဘီလီယံ ဘဏ်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာသော အချက်အလက်များ ပေါ်ထွက် မလာသေးချိန်တွင် ERI က ၅ဘီလီယံရှိကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။....Kamayut
ဇူကာဘတ်က အမေရိကန်၏ အချမ်းသာဆုံး အဆင့် ၂၀ ပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ဖြစ်လာ
Facebook တည်ထောင်သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် ၂၀ မြောက် ပုဂ္ဂိုလ်နေရာကို ပြန်လည် ရရှိလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Forbes မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးရေ ၄၀၀ စာရင်းထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယမန်နှစ်တုန်းက ပိုင်ဆိုင်မှု ငွေအင်အား ကန်ဒေါ်လာ ၉.၄ ဘီလျံနဲ့ နံပါတ် ၃၆ မှာ ရှိခဲ့သူပါ။ ယခုတော့ ပိုင်ဆိုင်မှု ၁၉ ဘီလျံ ဝန်းကျင် ရှိလာပြီး နံပါတ် ၂၀ ပြန်ရလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ IPO ကို ထုတ်မရောင်းခင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က သူရခဲ့တဲ့ အဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ သူပြန်ရလိုက်ပါပြီ။
Bloomberg ရဲ့  ပြောဆိုချက်အရ ကတော့ ဇူကာဘတ်ပိုင်ဆိုင်မှုက ၂၁.၇ ဘီလျံတောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ထပ်လည်း များချင်များနေအုံးမှာပါ။ အမေရိကန်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာတော့ ဘီလ်ဂိတ်က ရှိနေပါ သေးတယ်။ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုက ၇၂ ဘီလျံတောင်ပါ။ Larry Page နဲ့ Sergey Brin ကတော့ နံပါတ် ၁၃ နဲ့ ၁၄ ကို အစဉ်လိုက် ယူထား ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့  နည်းပညာ လုပ်ငန်းဖြင့် အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သူ ဆယ်ဦးစာရင်းထဲ မှာတော့ ဇူကာဘတ်က နံပါတ် ၆ မှာ ရှိနေပါတယ်။ စာရင်းအတိအကျက အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Bill Gates: No. 1, $72 billion
Larry Ellison: No. 3, $41 billion
Jeff Bezos: No. 12 , $27.1 billion
Larry Page: No. 13, $24.9 billion
Sergey Brin: No. 14, $24.4 billion
Mark Zuckerberg: No. 20, $19 billion
Steve Ballmer: No. 21, $18 billion
Michael Dell: No. 25, $15.9 billion
Paul Allen: No. 26, $15.8 billion
Charles Ergen: No. 32, $12.5 billion
အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မှာ နည်းပညာ လုပ်ငန်းများဟာ အရေးအကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့ ၀တ်ဆင်ခဲ့သည့် မဟာလတ္တာ ၀တ်ရုံတော်ကို ဂျပန်နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းမည်
အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်)တွင် ပြသထားသည့် သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့ ၀တ်ဆင်ခဲ့သော မဟာလတ္တာ ၀တ်ရုံတော်ကို ရေရှည်ပြသနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် နေကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသန၊ အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း) ဒေါ်နုမြဇံက ဆိုသည်။
ထိုသို့ နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကမ်းလှမ်းထားပြီး ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ (သို့မဟုတ်) နိုဝင်ဘာတွင် စတင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
''ဂျပန်နိုင်ငံက Textile Specialist တစ်ဦးက ဒီကိုလာပြီးတော့ သူတို့နည်းပညာနဲ့ ဒီဝတ်ရုံတွေကို ထိန်းသိမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ်ရုံတွေမှာ သြော်ဂဲနစ်ကော၊ အင်သြော်ဂဲနစ်တွေပါ ရောနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် နည်းပညာနဲ့ ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါ လက်ဝင်တယ်။ ဒီဝတ်ရုံတွေမှာက ရွှေချည်၊ ငွေချည်ထိုးတွေ အပြင် ကျောက်၊ သံ၊ ပတ္တမြားတွေပါ ပါတဲ့အတွက် အရမ်းကို အနုစိတ်တယ်။ အဲဒီလိုလာပြီး ထိန်းသိမ်းတဲ့အတွက် သူတို့အနေနဲ့လည်း သုတေသနပြုလို့ ရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပြတိုက် တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့လည်း ပညာရမယ်'' ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထိန်းသိမ်းမှုသည် အကြီးစား ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်အား အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ရန် ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ကာ တစ်နှစ်ခွဲ၊ နှစ်နှစ်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဏာမစမ်းသပ် စစ်ဆေးမည့် ကာလသည် တစ်လခွဲခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Textile Specialist ပညာရပ်တွင် အမျိုးအမည် ပေါင်းများစွာ ရှိကြောင်း၊ နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းပါက ကနဦးအနေဖြင့် ကြိုတင်စစ်ဆေး ရမည်ဖြစ်ကာ ယင်းနောက် အစီရင်ခံစာတင် သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် အမျိုးသားပြတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးကျော်ရှင်နောင်က ဆိုသည်။
(သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့ ၀တ်ဆင်ခဲ့သည့် မဟာလတ္တာ ၀တ်ရုံတော်အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အမျိုးသားပြတိုက်))
တောင်းပန်ဖို့ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တွေ အစိုးရကို တောင်းဆို
အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က သံဃာတော်တွေ အရင်စစ်အစိုးရကို ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင် သပိတ်မှောက်ထားတာကို သပိတ်ပြန်လှန်ပေးဖို့အတွက် အစိုးရက တောင်းပန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တွေက ဒီနေ့ တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် သာဓုကျောင်းတိုက်မှာကျင်းပတဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးအခင်း ၆ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားမှာ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဦးစန္ဒာသီရိက မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"ဦးဇင်းတို့ သံဃာထုအနေနဲ့ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ပွဲ ပြုလုပ်ထားတာ ၁၉ဝဝ ခုနှစ်နဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ဆိုရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ငဲ့ကွက်ပြီးတော့ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စကို ပြန်ပြီးတော့ သပိတ်လှန်ပေးချင်တယ်၊ ဦးဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအရ ဦးဇင်းတို့ သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဆရာတော်၊ သံဃာတော်တွေကို ဝန်ချတောင်းပန် လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စပြုမှသာလျှင် သပိတ်ကိုလှန်ပေးလို့ရမှန်ဖြစ်တယ်”
စစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ် သံဃာတော်တွေက စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သံဃာတွေက မိန့်ပါတယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ စစ်မှန်တဲ့ အခြေခံဒီမိုကရေစီရရှိရေးစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးချက်နဲ့ ဒီရွှေဝါရောင် ၆ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ကျင်းပတာလို့သိရပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၆ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို မဲဆောက်မြို့ တောရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သံဃာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့က ကမကထပြုပြီး ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သံဃာ့ဥသျှောင် မဲဆောက်ဌာနခွဲရဲ့ တာဝန်ခံ ဦးစန္ဒောဘာသက အခုလိုမိန့်ပါတယ်။
“သံဃာတော်တွေကို အစိုးရကနေတောင်းပန်ပါဆိုတဲ့ ပထမရည်ရွယ်ချက်နော်၊ ဒုတိယရည်ရွှယ်ချက်ကတော့ သာသနာတော်ကြီးကို ဖျက်လိုရာဖျတ်စီးကြောင်း ကြံစည်တယ်၊ ရည်ရွယ်တယ်၊ နောက်ပြီး သံဃာတော်တွေကို အသင်းခွဲတယ်၊ သံဃာတော်တွေကို အသင်းခွဲတာကလည်း အင်မတန်မှ အပြစ်ကြီးတယ်၊ အဲဒီဥစ္စာတွေကို မလုပ်ပါနဲ့၊ ရပ်တန်းက ရပ်ပါဆိုတာကို ရည်ရွှယ်ပြီးတော့ ဒီခြောက်နှစ်မြောက် ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်။”
ချင်းမိုင်မြို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်အနီးရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး ၆ ထပ်တိုက် အမြင့်ရှိ ငြမ်းပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျ
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်အနီးရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုမှာ ယမန်နေ့က အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး ၆ ထပ်တိုက် အမြင့်ရှိ ငြမ်းပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျ သေဆုံးခဲ့သည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား မောင်ရဲထွန်းနိုင်သည် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ အချိန်ပို ဆင်းနေချိန်အတွင်း ၆ ထပ်တိုက်ပေါ် ငြမ်းတပ်ဆင်နေစဉ် ခြေနင်း သံပြား ကျိုးကြရာမှ ပြုတ်ကျခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ပြောပြချက်အရ သိရ သည်။
သေဆုံးသူ မောင်ရဲထွန်းနိုင် အသက် (၂၃)နှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီတိုင်း ဝါးခယ်မမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ထိုင်း - မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ နားလည်မှုစာ ချွန်လွှာ (MOU) ဖြင့်၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကစပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သည့် ပါဝါလိုင်းကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပါဝါလိုင်းကုမ္ပဏီက သင်္ဂြိုဟ် စရိတ်ကူညီသွားမှာ ဖြစ်ပြီး နစ်နာ ကြေးအတွက် သေဆုံးသူ၏ မိဘများနှင့် ပြေလည်မူရယူပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မယ်လို့ ပါဝါလိုင်း ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
မြန်မာအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ (MAP) ဖောင်ဒေးရှင်း နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတော့ နစ်နာကြေးအတွက် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ကူညီသွား မည်ဟု ဆိုသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း အခုအချိန် အထိ ဆက်သွယ်၍ မရဘဲဖြစ်နေသည်။
ပါဝါလိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က အမြန်ဆုံး သင်္ဂြိုဟ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ တိုင်းကြားတာတွေ မပြုလုပ်ရန် နှစ်ဘက်သဘောတူညီမှုယူပြီး ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား အရေးဆောင်ရွက်သူများကို ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းက သေဆုံးသူ၏ ဆွေးမျိုးသားချင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီးမှ သင်္ဂြိုဟ်နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အတွက် လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် စနေနေ့တွင် သင်္ဂြိုဟ်မှာ ဖြစ်ပါ သည်။
မုန်တိုင်းတွေနဲ့ဝေ.. Weather News Update
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဖက်မှာရော။ အရှေ့ဖက်မှာရော။ မုန်တိုင်းတွေနဲ့ ဝေနေပြီလေ။ ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ မုတ်သုံကအဆုတ်၊ မုန်တိုင်းကအတက်ပါလို့။
အနောက်ဖက်က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းကလည်း မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ ဥနေတာကြာပေါ့။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက မုန်တိုင်းကလည်း ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ဗီယက်နမ်အလယ်ပိုင်းကမ်းခြေကို ညကဖြတ်နေပြီ။ မိုးတွေကြီးနေလိုက်တာ (၂၄)နာရီမိုးရေချိန်ကဘဲ ၇ လက်မကျော် ၈ လက်မလောက်အထိရှိပါတယ်။ ကြားရဦးမယ်။ ရေကြီးတာတွေ၊ ပျက်စီးတာတွေ၊ သေကြေတာတွေ။
ဒီကနေ့မှာတော့ လာအို -ထိုင်းကိုဖြတ်မယ်။ ပြီးရင်တော့ သာဂိတို့အလှည့်ပါဘဲ။ အရှေ့ဖက်ဆုံးက မုန်တိုင်း (USAGI- 2319w) ကလည်း လိုတော့လိုသေးပေမယ့် သူကိုလည်းလျှော့တွက်လို့ မရဘူး။ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးများအား အဓမ္မကျူးလွန်သူကို သေဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့် အဆိုတင်မည်
အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးများအား အဓမ္မပြုကျင့်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါက သေဒဏ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် အဆိုကို သင်္ကန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်က အောက်တိုဘာ လတွင် ကျင်းပမည့် အဋ္ဌမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းမည်ဟု ဆိုသည်။
လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်က အမျိုးသမီးများအပေါ်တွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာ
ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုလာမည့်အကြိမ် လွှတ်တော်တွင် အသက်၁၆ နှစ်အောက်ကလေး သူငယ်များအား အဓမ္မကျူးလွန်ပါက သေဒဏ်အထိ ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက် အဆိုကို တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် န၀မအကြိမ် လွှတ်တော်တွင်မူ အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု ကာကွယ်သည့် သီးသန့်ဥပဒေတစ်ခုကို တင်သွင်းမည်ဟု ပြောသည်။
“အနာဂတ်အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အင်မတန် ထိပါးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အပေါ်မှာ ကျူးလွန်မှုတွေ လပိုင်းအတွင်း အမြောက်အမြား တွေ့ရတယ်”ဟု ဦးသိန်းညွန့်က အဆိုတင်သွင်းရမည့် အကြောင်းကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှုအားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် အတွင်း အဓမ္မပြုကျင့်မှုပေါင်း ၉၃ မှုအနက် ၇၉ မှုမှာ အသက်မပြည့်သေးသည့် ကလေးများသာဖြစ်ကြောင်း လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းက စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြို့နယ်ပေါင်း ၄၅ ခုတွင်လည်း ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများဖွဲ့ပြီး ပညာပေး ဟောပြောမှုများ
ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရက်ပုန်းဆိုင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ညစ်ညမ်း ဗီဒီယိုခွေများနှင့် ကာမစိတ် နိုးကြားစေသော ဆေးဝါးများကို ဖမ်းဆီးနေသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း၏ ပြောဆိုချက်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းတွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှု ပေါင်း ၁၃၅ မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက်မပြည့်သူများအား အဓမ္မကျင့်ခံရမှုမှာ ၈၈ မှုရှိခဲ့သည်။ ထိုအမှုများတွင် စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည့် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား အဓမ္မကျင့်မှု ၁၅ မှုရှိခဲ့သည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ တည်းခိုရန်နေရာမလုံလောက်မှုကြောင့် တည်းခိုခန်းများကိုရွေးချယ်လာ
[ ရွှေနု ၊ ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ]
နိုင်ငံ ခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်မှု များပြားနေသဖြင့် တည်းခိုရန်နေ ရာ မလုံလောက်မှုကြောင့် တည်းခို ခန်း (Guest House ) များတွင် တည်းခိုနေရကြောင်း သိရသည်။
ဟိုတယ်အခန်းခများ ဈေး ကြီးခြင်းနှင့် တည်းခိုရန် အခန်းမ လုံလောက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံခြား သားများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရှိတည်းခိုခန်းများတွင် ငှားရမ်းနေ ထိုင်မှုများရှိလာပြီး ယင်းသို့တည်း ခိုသူများမှာလည်း Package Tour များမဟုတ်ဘဲ FIT များပိုမိုများ ပြားနေကြောင်း တည်းခိုခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အသိုင်းအဝိုင်း မှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘားလမ်း ရှိတည်းခိုခန်းတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိ သူက''အခုလိုရာသီမှာတောင် နိုင်ငံခြားသားတွေ တည်းခိုတာ ပြည့်နေတယ်။ ပွင့်လင်းရာသီဆို ရင် အခန်းလိုအပ်ချက်ပိုရှိနိုင်တယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာရှိတာမျိုးတွေ ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီ''ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့နိုင်ငံခြားသား ဧည့် သည်များ တည်းခိုခန်းများ၌ လာ ရောက်တည်းခိုရာတွင် ဟိုတယ်/ ခရီးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုလိုင်စင်ရ တည်းခိုခန်းများသာမက စည်ပင် လိုင်စင်ရတည်းခိုခန်းများတွင် လည်း တည်းခိုလျက်ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် များအသင်းမှသိရသည်။
အဆိုပါအသင်းမှတာဝန် ရှိသူက ''လိုင်စင်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်ခုက ဟိုတယ်ခရီးလိုင်စင်၊ နောက်တစ်မျိုးက စည်ပင်လိုင်စင်၊ ဟိုတယ်ခရီးက တရားဝင်ထုတ် ပေးတဲ့လိုင်စင်ကသာ နိုင်ငံခြား သားတွေတည်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စည်ပင်လိုင်စင်နဲ့ ဂက်စ်ဟောက် တွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေတည်း ရင် ထူးထူးခြားခြားအရေးယူတာ မရှိဘူး။
ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ တက်မှသာအရေးယူတာ။ ဝန်ကြီး ဌာနအနေနဲ့ စည်ပင်လိုင်စင်ယူ ထားပေမယ့် ဒီလိုတည်းခိုခန်းတွေ မှာ တချို့ကဝန်ဆောင်မှုတွေ အ ရမ်းကောင်းတာမျိုးရှိပြီး ဧည့်သည် ကိုယ်တိုင်က အဲဒီနေရာမှာမှတည်း ချင်တာမျိုးတွေရှိနေလို့ ထူးထူး ခြားခြားအရေးယူတာမျိုးတွေ မလုပ်တာလို့ ထင်ပါတယ်''ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရူဘီ လန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ မန်နေ ဂျင်းဒါရိုက်တာဦးအေးကျော်က ''ဟိုတယ်တွေဈေးအရမ်းကြီးတော့ သက်သာတာကို ရှာလာတယ်။ အထူးသဖြင့် အက်ဖ်အိုင်တီတွေက ဈေးသက်သာတာရှာကြတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သူတို့ နိုင်ငံမှာ လိုင်စင်တွေထုတ်ပေးထား တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် နိုင်ငံ ခြားသားတွေက အရမ်းကိုဝင်နေ တယ်။ ဒီတော့ဒီလိုတည်းခိုခန်းအ သေးလေးတွေကို လိုင်စင်ချပေး တာမျိုးနဲ့ ဟုမ်းစတေးတွေကို သတ် မှတ်ချက်တွေချပြီးခွင့်ပြုသင့်ပါ တယ်''ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ပြည်တွင်း သို့ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ နိုင်ငံခြားခရီး သည်ဝင်ရောက်မှုမှာ ဇန်နဝါရီမှ ယခုလအထိ စုစုပေါင်းလေးသိန်း ခွဲကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အတွက် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်သော e-Visa စနစ်ကို သုံးလအတွင်း စတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးခင်ရီက ပြောကြားသည်။
e-Visa စနစ်တွင် အသုံးပြုမည့် မာစတာ၊ ဗီဇာစသည့် အွန်လိုင်းငွေပေး ချေကတ်များကို စစ်ဆေးနိုင်မည့် စနစ်နှင့် အခြေခံအဆောက်အဦ လိုအပ်ချက်များ အတွက် ကုမ္ပဏီများနှင့် ညှိနှိုင်းနေကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
"တစ်လ၊ နှစ်လအတွင်း အပြီးမဟုတ်တောင် သိသာထင်ရှားတဲ့ အနေအထားတော့ ရောက်မယ်" ဟု ဦးခင်ရီကဆိုသည်။
အွန်လိုင်းဗီဇာစနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရှိ ခရီးသွား များထံမှ ကောက်ယူမည့် ဗီဇာကြေးကို လက်ခံမည့် ဘဏ်များ၊ ငွေလွှဲစနစ်များအတွက် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ၄င်းကရှင်းပြသည်။
e-Visa စနစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်းစတင်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် စတင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးပြောင်းလဲ လာပြီဖြစ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကို များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်မည့် e-Visa စနစ်ကို အမြန်ဆုံးအကောင် အထည်ဖော်သင့်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရှင်များက အကြံပြုထားသည်။
အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ဗီဇာလျှောက်ထားရန် မလိုဘဲ သွားရောက်နိုင်ရန် ဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဆိုသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ကာ နိုင်ငံ ၅၁ နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လိုသူများ အတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
တစ်ရက်က ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်မှာ ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနား တစ်ခုကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကို UMFCCI နဲ့အတူ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ကြီးမှူးကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာ မဟာသီယာရဲ့ စီးပွားရေး ဟောပြောပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မဟာသီယာရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကို အရင်တုန်းက TV ကနေ နားထောင် ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလို လူကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ရတော့ အတော်လေး ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာတာဟာလည်း အလွန်ထူးခြားပြီး ထင်သာမြင်သာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာမဟာသီယာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အလွန်သံယောဇဉ် ရှိခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတာဟာ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတွေ ကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်း မှာ သူရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့် မလေးရှားငွေ ရင်းဂစ် (Ringgit) ဟာ စီးပွားရေး ဖိအားပေးမှုတွေ ကိုတောင် တောင့်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၂၀ Vision ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ မဟာဗျူဟာကို ဖော်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ၂၀၂၀ Vision ဆိုတာက မျက်စိရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းအင်အားကို မျက်စိဆရာဝန်တွေက သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ Vision ရှိရင် ညာဘက်နဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံး နှစ်ခုစလုံးဟာ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်နိုင်တာကို ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝေါဟာရကိုယူပြီး မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကို သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ သမိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ပြတဲ့အခါ သူဟာ ၈၆ နှစ်အရွယ်တောင် ရှိနေတယ် ဆိုတာကို အံ့သြစရာ သိခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရင် ၇၀ နှစ်လောက်သာ ရှိမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဟောပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ပေးထားတဲ့ ကုလားထိုင်ပေါ်မထိုင်ဘဲ စင်မြင့်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး တစ်နာရီကျော်ကျော် လက်တန်းဟောသွားပါတယ်။ အားကျဖို့ကောင်းလှတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတစ်ယောက် ပါပဲ။ သူဟာ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုသမိုင်းကို ရေးခဲ့သူတစ်ဦး အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို တင်ပြသွားတာမို့ သိပ်ပြီးနားထောင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့စာတွေ့ တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီးတင်ပြသွားတာ အတုယူစရာပါပဲ။
ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဟာ သူနိုင်ငံအတွက် ဘာဖြစ်လိုသလဲ ဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဖော်ထုတ်ခဲ့သလို လက်တွေ့မှာ ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့တယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာမဟာသီယာ တစ်နေ့တစ်နေ့ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တင်ပြချက်ကို သုံးသပ်ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံမှာဖြစ်စေ၊ အရေးကြီးဆုံးက ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းဟာ မိမိနိုင်ငံအကျိုးအတွက် မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာ၌ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူ၏ အရည်အသွေး အမြော်အမြင်မှာ အခြေခံ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မမှားသော ရှေ့နေ၊ မသေသောဆေးသမားလို နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ပေါ်လစီချမှတ်တဲ့နေရာမှာ ဒေါက်တာမဟာသီယာမှာ ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့သလို အမှားတွေလည်း လုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် အာရှငွေကြေး အကျပ်အတည်း ပြဿနာရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတို့ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေက အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကြီး ဆူဟာတိုဟာ ကနဦးမှာ အလွန်အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းကို အနှစ် ၂၀ အတွင်း သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေး တွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ California တက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့တွေ ရထားကြသူတွေ ဖြစ်တော့ သူတို့ကို Berkerly Boys ဆိုပြီး ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ အကြံကောင်းတွေကြောင့် အောင်မြင်မှုရခဲ့ကြောင်း လက်ခံထားကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၇ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း ဖြစ်တဲ့အချိန် သူတို့ရဲ့ အကြံပေးမှုနဲ့ သမ္မတကြီးဆူဟာတိုဟာ IMF ကို အပြည့်အဝ လက်ခံလိုက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ မျက်စိထဲမှာ မထွက်တဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ IMF ဥက္ကဋ္ဌက မတ်တတ်ရပ် လက်ပိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်မှာ သဘောတူစာချုပ်ကို ကျောင်းသားကလေးတစ်ယောက်လို ခပ်ကုပ်ကုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနေတဲ့ သမ္မတကြီးဟာ ဆူဟာတိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မဟာသီယာကတော့ IMF ပေးတဲ့ အကြံဉာဏ်ကို လုံးဝလက်မခံဘဲ မလေးရှားငွေကို တောင့်ခံထားခဲ့တယ်။ အချိန်တန်တော့ သူ့ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ဟာ မှန်ကန်တာ တွေ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့မဟာအမှားကတော့ Proton ကားထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားချစ်စိတ် လွန်ကဲပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မော်တော်ယာဉ် ရအောင်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို ချမှတ်ခဲ့တယ်။ လက်တွေ့မှာ ဒီကားကို ဝယ်မယ့်သူ မရှိတဲ့အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို အတင်းအဓမ္မ ရောင်းချ ခဲ့ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက ကျင့်သုံးတဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကြောင့် အခုဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ Pick-up ကားထုတ်လုပ်မှုမှာ ပထမနေရာမှာ ရောက်ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
စီးပွားရေးပေါ်လစီတစ်ခု ချမှတ်တဲ့နေရာမှာ ကာလတိုမကြည့်ဘဲ ရေရှည်မှာ တွေ့ကြုံရမယ့် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်တွင်း မော်တော်ယဉ် ထုတ်လုပ်မှု ပေါ်လစီလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး စက်မှုဇုန်တွေမှာ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အစစအရာရာ မှားယွင်းနေတာကို လူတိုင်းသိပေမယ့် မျက်စိမှိတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမို့ နိုင်ငံခြားက အကောင်းစစ်စစ် ကားတစ်စီးကို စက်မှုဇုန်က ထုတ်လုပ်တဲ့ကား ဖြစ်အောင် အမြီးကဖြတ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာကို လူတိုင်း မှတ်မိကြလိမ့်မယ်။ သူများကို လိမ်ညာတာထက် ဆိုးတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညာတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ မဟုတ်တာကို ဟုတ်တယ်လို့ ပြောကြ၊ ဆိုကြလုပ်ကြတဲ့ သူတွေမှာ တာဝန်ကြီး လှပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာလည်း မော်တော်ယဉ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားစရာတွေက အများကြီး။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ တွေရဲ့ စေတနာက ကားဟောင်းတွေ စီးနေတဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကားသစ်တွေ စီးနိုင်အောင် ကားတင်သွင်းပါမစ်တွေ ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ တခြားစီ။ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေ အတွက်သာ အကျိုး အမြတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးပေါ်လစီ တစ်ခု ချမှတ်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းအကျိုး အကျိုးဆက်တွေကို ဘက်စုံက စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းက စဉ်းစားရင် အမှား တွေ့နိုင်တယ်။
အခုတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာမှာ Stakeholder Participation ဟာ ပေါ်လစီ ဖော်ထုတ်ချမှတ်မှုဟာ အဓိကဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံလာခဲ့တယ်။ အဓိပ္ပာယ်က ပေါ်လစီတစ်ခု မချမှတ်မီ ပတ်သက် သက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေနဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်၊ သုံးသပ်ပြီးမှ ချမှတ်သင့်ကြောင်း လက်ခံလာခဲ့တယ်။
မှားယွင်းတဲ့ စီးပွားရေးပေါ်လစီတွေ ချမှတ်တဲ့နေရာမှာ စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်တာပါလို့ ပြောလို့မရဘူး၊ ဆင်ခြေပေးလို့ မရဘူး။ စေတနာ ကောင်းတာ မကောင်းတာထက် ရလဒ်အဖြေက ဘာဖြစ်မလဲ စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ဆုံးဖြတ်တာထက် အများရဲ့ အယူ အဆအတွေးအမြင်တွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရင် အမှား နည်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ Participatory Leadership လို့ခေါ်တယ်။ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဟာ အရေးကြီးလာကြောင်း လက်ခံလာခဲ့တယ်။ အများရဲ့ အကြံတွေကို တောင်းပြီးမှ ပေါ်လစီတွေ ချမှတ်ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း သဘောတူလာခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာမဟာသီယာ နဲ့ပတ်သက်လို့ စဉ်းစားလိုက်ရင် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဟာ ပြီးပြည့်စုံနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အားသာချက်တွေ ရှိသလို အားနည်းချက်တွေ ရှိတာဟာလည်း သဘာဝတရား ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ချိန်ခွင်မှာ တင်ပြီး ချိန်ထိုးရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာ လူသားဖြစ်တာမို့ အမှားမရှိတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒေါက်တာမဟာသီယာ ဟောပြီးချိန်မှာ သူ့ကိုမေးခွန်းတွေ မေးခွင့်ပေး ပါတယ်။ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်ချင်တာနဲ့ ဆရာကမေးခွန်းတစ်ခု မေးမိပါတယ်။ မေးတဲ့မေးခွန်းကတော့ သူကျင့်သုံးခဲ့တာ ခေါင်းဆောင်မှုဟန် ပုံစံကို သိပါရစေလို့ မေးခဲ့ပါတယ်။ သူက အတိအကျ မဖြေဘဲ သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု အတွေ့အကြုံတွေကို ဖော်ပြသွားပါတယ်။ ဆရာ့လိုပဲ မေးခွန်းမေးကြတဲ့သူ တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာမဟာသီယာက စိတ်ရှည်လက်ရှည် အဖြေပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဟောပြောပွဲပြီးတော့ သူက စင်မြင့်ပေါ်က ဆင်းလာပြီး ဆရာ့ကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ အခုလို လေးစားကြည်ညိုစရာ ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပ်ကံကောင်းတယ် လို့ ယူဆမိပါတယ်။
စနိုဒင်ကို ဥရောပ လူ့အခွင့်အရေး ဆုအတွက် အမည်တင်သွင်း
တလောက ကမ္ဘာသတင်းလောကမှာ နေရာယူထားသူ အမေရိကန် စပိုင်ဟောင်း အက်ဒ၀ပ်ဒ် စနိုဒင်ဟာ ဥရောပ သမဂ္ဂက ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်း ခံထားရပါတယ်တဲ့။
ဓာတ်ပုံ-THE IRISH TIMES~
နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက နယ်လ်ဆင် မန်ဒဲလားတို့လည်း Sakharov Prize ဆုကို ရရှိခဲ့ဖူးကြပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်တွေကို ပေါက်ကြားမှုနဲ့ ထွက်ပြေး တိမ်း
ရှောင်ရင်း ရုရှား နိုင်ငံမှာ ယာယီခိုလှုံနေတဲ့ စနိုဒင်ဟာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မှုအတွက် Sakharov Prize ဆုရဖို့အတွက် ဥရောပ ပါလီ မန်က အမည်စာရင်းတင်သွားခံထားရသူ ၇ ဦးထဲမှာ ပါဝင်လာတယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းတပုဒ်မှာ ဆိုပါတယ်။
ဥရောပ ပါလီမန်မှာ Greens တွေက စနိုဒင်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အင်တာနက်နဲ့ တယ်လီဖုန်း လျှို့ဝှက်
စောင့်ကြည့်ဖမ်း ယူ နေမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့် ဒါဟာ လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် ကြီးမားတဲ့ တာဝန် ထမ်းရွက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အမည် စာရင်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အက်ဒ၀ပ် စနိုဒင်ဟာ ကျနော်တို့ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ကူညီရင်း သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ ရပါတယ်။ ဥရောပနဲ့ အမေရိကားတို့က သူလျှိုတွေက နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေအပေါ် စနစ် တကျ ချိုးဖောက်နေတာကို သူက မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာမို့ သူ့ကို ဂုဏ်ပြုဖို့ ထိုက်တန်တယ်” လို့ လက်ဝဲယိမ်း Greens အုပ်စု ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Rebecca Harms နဲ့ Dany Cohn-Bendit တို့က ပြောကြ ပါတယ်။
ဒီလို ဥရောပသမဂ္ဂက ပေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆု Sakharov Prize အတွက် စနိုဒင်ကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းလိုက်တဲ့ အထဲ ပါဝင်လာတာကြောင့် အမေရိကန်အနေနဲ့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှာကတော့ အသေအချာပါ။
အဆိုပါ ဆုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးများ ပညာရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလို့ တာလီဘန်တွေရဲ့ သေနတ်နဲ့ ဦးခေါင်းပစ်ခံခဲ့ရသူ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက မာလာလာလည်း အပါအ၀င်ဖြစ် ပါတယ်။
Sakharov Prize ဆုအတွက် ဥရောပ ပါလီမန်ကတော့ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံး ၃ ဦးကို ဇကာတင် မဲပေး ရွေးချယ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ ပါလီမန် ခေါင်းဆောင်တွေ က ဆုရရှိသူကို ရွေးချယ်သွားမှာပါ။
မိုးရေထဲသွားပြီး ခြေထောက်ရေစိုလျှင် ရေနွေးမသောက်သင့်
Source : Aung Aung
Rakhine News Group
တစ်ခါက ဧရာမသင်္ဘောအင်ဂျင်ကြီးပျက်သွားပါတယ်။ သင်္ဘောပိုင်ရှင်ဟာ တော်ပေ့ဆိုတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေခေါ်ပြင်ပေမယ့်အင်ဂျင်ကပြန်ကောင်းမလာပါဘူး။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ စက်ပြင်အဖိုးကြီးကိုခေါ်လာပါတယ်။ အဖိုးကြီးဟာ သူငယ်စဉ်ကတည်းက ဒီသင်္ဘောအင်ဂျင်ခန်းမှာ လုပ်လာခဲ့တဲ့သူပါ။ အဖိုးကြီးက စက်ပြင်ကိရိယာတွေထည့်တဲ့ အိတ်ကြီးတစ်လုံးသယ်လာပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးကို အသေအချာလိုက်စစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောပိုင်ရှင်ကလည်း နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ဒီအဖိုးကြီးတော့ ပြင်နိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ် ။
အစအဆုံးလိုက်စစ်ပြီးတဲ့နောက် အဖိုကြီးဟာသူ့အိတ်ကြီးဆီသွားပြီး တူသေးသေးလေးတစ်ချောင်းထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်အင်ဂျင်ရဲ့ တစ်နေရာကိုတူလေးနဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးခေါက်လိုက်ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို အင်ဂျင်ကြီးဟာ ထလည်ပါတော့တယ်။ အဖိုးကြီးဟာသူ့တူလေးကို အိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကြီးပြန်ကောင်းသွားပါပြီ ။
နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါ သင်္ဘောပိုင်ရှင်ဟာ အဖိုးကြီးဆီက စက်ပြင်ခ တောင်းခံလွှာကိုရပါတယ်။ စက်ပြင်ခတောင်းထားတာက $ 1000 ပါ။ သင်္ဘောပိုင်ရှင်က မကျေနပ်ပါဘူး ။
" ဘာလဲကွာ . . သူလည်းဘာမှ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ "
နောက်တော့ ဘာတွေကြောင့် ဒီလောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုတာ ဘောက်ချာဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ် ။ အဖိုးကြီးပေးလိုက်တဲ့ ဘောင်ချာက အောက်ပါအတိုင်းပါ
တူနဲ့ခေါက် ခ --- $ 2
ဘယ်နေရာခေါက်ရမယ်ဆိုတာသိခ --- $ 9,98
ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေရာမှာ ကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတာသိဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ။
Credit To Nyein Chan Win
ဦးသန်းရွှေသား ထွန်းနိုင်ရွှေအကြောင်း တစေ့တစောင်း
သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်တို့လုပ်ချလိုက်ပုံကတော့ လွန်တယ်။ မယားကြီးနဲ့မကွာ ရသေးတဲ့ ယခင်တပ်ချုပ်ကြီး (ငြိမ်း) ရဲ့သား ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ ဇနီးဆိုပြီး သံတော်ဆင့် (စက်တင်ဘာ (၁၄ - ၂၀ -၂ဝ၁၃) မှာ မျက်နှာဖုံး ထိပ်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားတာ ကျန်လူကြီးတွေကို စော်ကားလိုက်တာဘဲ။ မယားကြီးနဲ့ ကွာရှင်းထားတာ မလုပ်ရသေးတဲ့ မယားငယ် ပုံကို အောက်က ရဲမေ ဒေါ်ကြည်ညွှန့်ရဲ့အထက်မှာ။ နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နာမည်ရဲ့အထက်မှာ။ အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲ့အထက်မှာတင်ပြီး ယတြာချေထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်..။
မယားကြီးက ဒေါ်ခင်သန္တာ (ခ) မတူးမာနဲ့က မကွာရှင်းရသေးဘူး။ မတူးမာရဲ့ပထမ အိမ်ထောင်က လားရှိုးစော်ဘွားကြီး စဝ်ခွန်မိန်းရဲ့သားအငယ်ဆုံး စဝ်ခွန်မိန်းနွှုက် (ခ) JERRY ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းနိုင်ရွှေ မှ လင်ကြီးငုတ်တုတ်ရှိလျက် အတင်းအဓမ္မလိုက် ကြိုက်နစ်သက်ပြီး ပတ်သက်နေလို့ လင်မယား ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး ၁၉၉၁ မှာ ကွာရှင်းလိုက် ကြရပါတယ်။ ကွာရှင်းပြီး ထွန်းနိုင်ရွှေ နဲ့ ယူလိုက်ကြတာပေါ့။
ပထမအ်ိမ်ထောင်ဖြင့် သမီးတယောက်နဲ့ သားတယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ (နာမည်တွေ မဖေါ်ပြတော့ပါ)။
ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ သားတယောက် ကျော်ကျော်နိုင်ရွှေ (ခုစင်ကာပူတွင်ကျောင်းတက် - အသက် ၁၉ နှစ်) နှင့် သမီးတယောက် (ခင်ခင်ဝတီနိုင်ရွှေ - ယခု အသက် ၁၄ နှစ်တို့ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မယားပြိုင် စံနစ်ကို ၁၉၇၆ မှာ ဆြာနေဝင်း စကျင့်သုံးခဲ့တာပဲ။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မှာ အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲ၊ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကြီးကျယ်စွာကျင်းပပြီး အတည်ပြုခဲ့တာပေါ့။ အတည်ပြုအပြီး တစ်နှစ်ခွဲအကြာမှာ အဲဒီ လမ်းလျှောက်သင်ခါစ အရွယ်ဥပဒေလေးကို မောင်နေဝင်း ရာဂစိတ် ထကြွသောင်းကျန်းလို့ ဥပဒေနှစ်ခု ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ပထမ ပြင်တာက အီတလီနိုင်ငံသူ ခံယူထားတဲ့ ရတနာနတ်မယ် (ခ) John Rose ကို ဦးနေဝင်း ဘောတ်ာခွေ့ နေလို့ ပြင်တဲ့ဥပဒေ။
မူလဥပဒေက မြန်မာနိုင်ငံကနေ အပြီးအပိုင် ပြည်ပထွက်ခွာသွားသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ပင် ပြန်လာခွင့် မပြုရ ။ အလွတ် တင်းကြပ်လှသည့် ဥပဒေကို (နောင်တရပြီး အမိနိုင်ငံတော်သို့ အပြီးအပိုင်ပြန်လာလိုပီး အသနားခံ လျှောက်ထားလာပါက လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးခြင်းအလိုက် နိုင်ငံတော်မှ သီးသန့် လက်ခံစဉ်းစားပေးမည်) လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်။ ဦးနေဝင်း သဘောတ်ာခွေ့ သူများသာ လို့မရေးထားရုံတမယ်ပါ။
ဒုတိယ ပြင်လိုက်တာက ဆြာနေဝင်းရဲ့ စတုတ္ထ မယား ဒေါ်နီနီမြင့်က ကွာရှင်းစာ လက်မှတ်ထိုး မပေးတဲ့အတွက် အရေးအခင်းကာလက သမ္မတ တစ်လ လုပ်ခွင့်ရခဲ့သည့် ဥပဒေပညာရှင် ဆြာဒေါက်တာမောင်မောင် ကနေပြီး မယားပြိုင် ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို တီထွင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီလိုလဲ ဥပဒေကိုပြင်လို်က်တော့ FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW ဂျာနယ်က ကာတွန်းလေးနဲ့ဖဲ့ပါလေရော။ ပုခက်ပေါ်က ဆံပင်ကောက်ကောက် ၁၅ -လ သမိးအရွယ် ဗိုလ်မလေး က မျက်လုံးလေး ပြူးပြီး ပုခက်ပေါ်က ဆင်းပြေးဖို့ ဟန်ပြင်နေပြီး ဆြာနေဝင်းက ဗိုက်ပူပူ ဖွားဖက်တော်က ပျော့ပျော့နဲ့ ပါးစပ်က ပြုံးဖြဲပြပြီး တဏှာရာဂ ဝေနေတဲ့ မျက်နာနဲ့ပုံပေ့ါ။
ရေးထားတာက နာတတ်ရင် လဲသေလောက်အောင်ရေးထားတာ။ Ne Win plot to rape it's own infant law. နေဝင်း သူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ မွေးကင်းစ ဥပဒေလေးကို မုဒိန်းကျင့်ရန် ကြံစည်နေပုံတဲ့။
တကယ်က ရတနာနတ်မယ်က နိုင်ငံတော်ကို ပြန်သာလာတယ်။ နိုင်ငံခြားသားပတ်စပို့ ကိုင်ထားလျှက်ဘဲ။ အဲဒီတုန်းက လူဝင်မှုဥပဒေက ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမဆို ဗွီဇာကို (၇ ) ရက်ဘဲပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ သက်တမ်းတိုးခွင့် မပေးပါဘူး။ ခြွှင်းချက် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကိုတော့ ချွင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
ထိုစဉ်က လူတွေက ပြောကြတယ်။ နိုင်ငံတော်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူကြီးအတွက်ဆိုတော့ ဗွီဇာ မဟုတ် ဆာဗွီတို တဲ့။
ရတနာနတ်မယ်နဲ့ ပေါင်းနေစဉ်က ဒေါ်နီနီမြင့်ကို မြစ်ကြီးနားကောလိပ် မဲဇာ ပို့ထားပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်ရဲ့ မောင်နဲ့ ညီမတို့ကို နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းအလွှဲ သုံးစားမှုတွေနဲ့ မဟုတ်တမ်းတရားစွဲ။ သတင်းစာ မျက်နာဖုံးတွေပေါ်မှာ အမြဲဖေါ်ပြ။ ရတနာနတ်မယ်နဲ့က ရက်တရာမပြည့်ခင် ကွဲကြပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဒေါ်နီနီမြင့်ကို ပြန်ပေါင်းဖို့ သံတော်ဆင့်တွေလွှတ် အခေါ်တော်ပင့်စေပါတယ်။ ဒေါ်နီနီမြင့်က အမှုတွေ မေးတော့ သတင်းစာတွေထဲ အမြဲထည့်ဖေါ်ပြနေတဲ့ အမှုတွေကို ဗိုလ်နေဝင်း တန်ခိုးနဲ့ ပျောက်စေ ဖြစ်သွားပါလေရော။ scrap with the balls ကောင်းတွေမှာ ပြောသလိုပေါ့။ ဘောဖျက် ဘောဖျက် ဆရာမက ခိုင်းလိုက်လျှင်ပေါ့။
ဆြာနေဝင်းတို့ကတော့ နိုင်ငံတော်အပေါ် အဲဒီလို သစ္စာရှိခဲ့ပြသည်။ အခုလဲ ဉာဏ်တော်မြင့်ပါတဲ့ သံတော်ဆင့်က ယတြာချေလေသလားမသိ။ ဂျာနယ်ထိပ်ဆုံးမှာ ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ မယားငယ်ပုံကို ဦးစားပေးတင်ထားတယ်။ ဆရာတော်ပုံက ဘေးရောက်နေတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲ့တော်ကိုတောင် အောက်မှာ ယောင်လည်လည်။ အဖြစ်သည်းပြနေတယ်။ ခိုးပေါင်းရဲသူက ပေါင်းတာ မပြောလိုပေမည့်။ သံတော်ဆင့်က ဒီဇာတ်လမ်းဘယ်လိုရှိနေတယ် ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့။ မယားကြီးရှိနေမှန်းလဲ သိနေတာပဲ။
မယားကြီးက ကွာမပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ လင်မယားနှစ်ဦး လုပ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးမှာ လက်ရှိ ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ နှစ်ဦးသားဆိုင်နေတာက ပွားများပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဓနအင်အားက အမေရိကန်ဒေါ်လာ -၂ ဘီလျံ ( US$ Two Billion) လောက်ရှိပါတယ်။ ကွာရှင်းမယ်ဆိုလျင် ထက်ဝက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာပါ။ ဒါကို မယားငယ်က တပြားတချပ်မှ မပေးရ အကျပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ထွန်းနိုင်ရွှေက ဦးသန်းရွှေတို့အိမ်နဲ့ သိပ်အဆင်ပြေလှတာ မဟုတ်ဘူး၊
ဒါတောင် ဒေါ်လာ၂ ဘီလျံလောက်ရှိတယ်။ သန္တာရွှေတို့ဘာတို့ အမတွေ ညီမတွေက ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ
၁-ယောက်စီကကို ၃ - ၅ ဘီလျံလောက် ချမ်းသာနေတာ။
ဒါနဲ့ တဆက်ထဲပေါ့။ ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ ခင်သန္တာ (မတူးမာ)တို့ ၁၉၉၁ မှာ လက်ထပ်တယ်။ ၁၉၉၂ ..ဧပြီလ ၂၃ -ရက်နေ့ မှာ ဦးသန်းရွှေ အာဏာသိမ်းတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီး နှစ်လလောက်အရမှာ မတူးမာရဲ့ ပထမ ခင်ပွန်း ဦးဂျယ်ရီ ဟာ ညဦးပိုင်း အိမ်အပြန် ပြည်လမ်းပေါ်မှာ လိုက်ပို့တဲ့ကားပေါ်က အဆင်းမှာ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီတော့ သူ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ အခုရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး (ညီအကိုဝမ်းကွဲတော်) တို့တတွေပါ အလောင်းရှာကြတဲ့အထိ အလုပ်ရှုပ်ကုန်ပါတယ်။ ရဲစခန်းလူပျောက်တိုင်ကြ။ ရင်ခွဲရုံကို ရှာကြရ။ နှစ်ပတ်ခန့်နေမှ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ မေးတော့ အဖေါ်နဲ့တွေ့လို့ တာချီလိတ်ဘက်ကနေ ယိုးဒယားဖက်အထိ ရောက်သွားနေလို့ပါပေါ့။ ဟိုတွေကလဲ လူ အ တွေမှတ်လို့။ တာချီလိတ်ဖက်တွေက ဆွေမျိုးတွေကိုမေးတော့။ သူပြောတဲ့ သူ့အဖေါ်ဆိုသူက ဂျပန်ရောက်နေတာ။
အဲဒီတော့မှ ကိုဂျယ်ရီက ဝန်ခံတယ်။ သူ့ ကိုထောက်လှမ်းရေးက ဆွဲသွားတာ။ မတူးမာနဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ်မှာပါတဲ့ သူ့ လက်မှတ်က (အင်)- လက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ ထပ်အသစ်ထိုးခိုင်းတာ။ ထွန်းနိုင်ရွှေကို မယားခိုးမှုနဲ့ တရားဆွဲမယ် သတင်းရထားလို့ ကာကွယ်တဲ့သဘော။ နဝတ အဖွဲ့ထဲက အရေးပါတဲ့ လူကြီးတယောက်ကိုယ်တိုင် သူ့ကိုတွေ့တယ်။ လိုတာရှိပြော ကူညီမယ်ပေါ့။ လက်မှတ်တေ့ ထိုးပေးပါပေါ့။ တကယ်လို့သာ မထိုးပေးလျင် ဘယ်လိုလုပ်လေမလဲလို့လဲ တွေးကြည့်ပေးကြပါဦး။
လက်မှတ်အစစ်ကို ပြန်ထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။ မယားခိုးမှု မဆွဲပါဘူးပါ ဆိုတဲ့တိခံဝန်ချုပ်ပါ ထိုးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူများမယားကို ခိုးတယ် မခိုးဘူးဆိုတာကို ဖြစ်စဉ်ကိုသာကြည့် သုံးသပ်ကြပေတော့။
မယုံလျင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနဲ့ သူ့ဘော်ဒါအဟောင်းတွေသာ မေးကြည့်ကြလို့ ရပါတယ်။ ဦးခွန်ထွန်းဦးကို ပြဿနာထဲ ဆွဲထဲ့ရတာကို တောင်းပန်ပါရစေ။ တိုင်ကြားစာမဟုတ်တဲ့ ပြည်သူတွေ သိသင့်တဲ့ အမှန်တရားစာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Credit : ဒီမိုဝေယံ
ကြောင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး
ကြောင်မွေးခြင်းဖြင့်လည်း ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး ထူးများ ရရှိပါတယ်။
အဓိကကတော့ သွေးပေါင်ချိန် အတက်အကျ များမှုကို ကာကွယ် ပေး ပါတယ်။ ကြောင်ကို အစာကျွေးခြင်းဖြင့် မိမိမှာ ရှိတဲ့ စိတ်ဖိအား၊ စိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာများကို သက်သာ ပျောက် ကင်း စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော ဖျားနာ ရောဂါ အတော်များများကို လည်း ပျောက်ကင်းစေ ပါတယ်။
လက်ရှိ အမေရိကန်မှာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသော နေထိုင်သူများက ကြောင်မွေး ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြောင်မွေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးကို အမေရိကန် ဆေးပညာရှင်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Credit: Innews Myanmar
စိန်ထည်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှုဖြင့် ဖခင်က သမီးနှစ်ဦးကို အမှုဖွင့်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဇီဇဝါ ဥယျာဉ်အိမ်ရာရှိ နေအိမ်တစ်လုံးတွင် ကျပ်သိန်းငါးရာကျော် တန်ဖိုးရှိ စိန်ထည် လက်ဝတ်လက်စားနှင့် တန်ဖိုးကြီးစာချုပ် စာတမ်းများ ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ဖခင်က သမီးအရင်းနှစ်ဦးကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားကြောင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးတင်လှအောင် အထက်တန်းရှေ့နေ အငြိမ်းစားသည် ဇနီးနှင့်အတူ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ သမီးအကြီးဆုံးထံ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် နေအိမ်ကို သော့ခတ်၍ ခြံဝင်းသော့ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့က ယင်းဥယျာဉ်အိမ်ရာ လုံခြုံရေးမှူးထံ အပ်နှံခဲ့ကာ အဆိုပါညတွင် အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ရှိ အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူ မခင်နန်းထက်အောင် ရောက်ရှိလာကာ ခြံသော့ကို တောင်းယူသွားပြီး နောက်ပိုင်းရက် များတွင် ဧည့်သည်များ ခေါ်ဆောင်ကာ ဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဥယျာဉ်အိမ်ရာ လုံခြုံရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ၁၀ လခန့်အကြာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်ပိုင်ရှင် ဦးတင်လှအောင် ပြန်လည် ရောက်လာချိန် နေအိမ်တွင်းရှိ သိန်းငါးရာကျော် တန်ဖိုးရှိ စိန်ထည် လက်ဝတ်လက်စား နှင့် တန်ဖိုးကြီး စာချုပ်စာတမ်းများ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ပြီးမှသာ မိမိတို့ သိရှိရကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
"ပိုင်ရှင်ရဲ့ သမီးအရင်းက ခြံသော့ လာတောင်းလို့ ပေးလိုက်တာ။ သူ့ဆီမှာက အိမ်သော့ရှိပြီးသား ဆိုတော့ ဝင်လို့ရတာပေါ့။ လုံခြုံရေးဂိတ်ဝ မှာလည်း နေ့စဉ် လူဝင်လူထွက်စာရင်း ရှိပြီးသားပါ" ဟု ၄င်းက ရှင်းပြသည်။
နေအိမ်၌ မိဘနှစ်ပါးမရှိခိုက်တွင် သမီးနှစ်ဦးက အိမ်၊ ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင် များခေါ်ကာ အိမ်အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ပြီး အိမ်၊ ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင် ခြောက်ဦးထံမှ တစ်ဦးလျှင် စရန်ငွေကျပ် သိန်းနှစ်ထောင်စီ ယူဆောင်သည်ဟု ကြားသိရကာ လချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းထားသော ပါဂျဲရိုးယာဉ် ကို ပြန်လည် မအပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်က ၄င်းတို့နှစ်ဦးကို လိုက်လံ စုံစမ်းနေသည်ဟု ကြားသိရကြောင်း ယင်းဥယျာဉ်အိမ်ရာ နေထိုင်သူများထံမှ သိရှိရသည်။
"အမေရိကန်က သမီးဆီကို သွားတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်တို့က သိရတာ။ ဒါပေမဲ့ ရဲစခန်းအမှုဖွင့် တိုင်စာမှာက ထိုင်းမှာ ဆေးသွားကုတယ်လို့ ကြားတယ်။ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဝင်မပတ်သက်ဘူး" ဟု ယင်းအိမ်ရာရှိ အိမ်ပိုင်ရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှု တိုင်ကြားသူတွင် သမီးလေးဦး ရှိပြီး ယခု အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခံရသည့် သမီးငယ်နှစ်ဦးသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ယင်းအိမ်ရာတွင် နေထိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း လုံခြုံရေးများ ထံမှ သိရှိရသည်။
သမီးအရင်းနှစ်ဦး ဖြစ်သူ မခင်နန်းထက်အောင်နှင့် မခင်ထက်အောင် တို့ကို ဇီဇဝါအိမ်ရာ၏ အိမ်ဂရမ်မူရင်းနှင့် ဝယ်ယူစာချုပ် မူရင်းနှင့်အတူ အခြားမြို့နယ် များတွင် ဝယ်ယူထားသော ကျပ်သိန်း ၅၁၁ သိန်းခန့်ရှိသော ဂရမ်မူရင်းခုနစ်ခု၊ စိန်ထည် ခုနစ်မျိုး၊ ကျောက်မျက်ရတနာ သုံးမျိုး၊ ရွှေထည်ပစ္စည်း ၁၀ မျိုးနှင့် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ တို့ကို ယူဆောင်သွားသည် ဟုဆိုကာ အမှုဖွင့်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ အမှုကို (ပ) ၃၄၁/၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်း ယင်းရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပုတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်လေးတွေဟာ သာမန်ကလေးတွေန...
စင်ကာပူအခြေစိုက်ကချင်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုေ...
ဆေးမင်ကြောင်ကြောင့် L'Orealနှင့် မိတ်မပျက်ဘဲ ဆက်လက...
ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးငယ် ဒုက္ခိတဖြစ်မှုအတွက် ဆေးထိုးသော ဆ...
မွေးပြီးပြီးချင်း ဆင်ပေါက်လေးကို နင်းချေ ပစ်ပေါက်သ...
ဇူကာဘတ်က အမေရိကန်၏ အချမ်းသာဆုံး အဆင့် ၂၀ ပုဂ္ဂိုလ် ...
သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့ ၀တ်ဆင်ခဲ့သည့် မဟာလတ္တ...
တောင်းပန်ဖို့ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တွေ အစိုးရကို တောင...
ချင်းမိုင်မြို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်အနီးရှိ ဆောက်လုပ်ရေ...
အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးများအား အဓမ္မကျူးလွန်သူကို သေ...
ကြောင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကျန်းမာရေး အကျိ...
စိန်ထည်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှုဖြင့် ဖခင်...